Somali - 01. Conversation - Booklet 7: Xakamaynta ee Iskutallaabta u Sharaxay Muslimiinta | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 7 The Cross
Sidee baan u keeni karnaa furashada Ciise Masiix Muslimiinta?
7.01 -- Xakamaynta ee Iskutallaabta u Sharaxay Muslimiinta
7.02 -- Diidmada dhimashada dhimashada Masiixa ee Islaamka
Qof kasta oo la hadlaya Muslimiinta ku saabsan Ciise iyo badbaadada uu ku guuleystey wuxuu gaari karaa bartilmaameedkiisa halkaasoo Muslimiintu aysan ka jawaabin, laakiin aamusnaanta. Weydiiso sababta heesta, wuxuu ka jawaabi karaa:
● Masiixiyiintu waxay raacaan mira dhalasho! Adigu horay ayaad u tirtirtay! (Sura al-Faatiha 1:7) Wiilka Maryan ma uusan dilin mana geeriyin iskutallaabta (Sura al-Nisa '4:157), haddaba, Alle wuxuu kor u qaaday naftiisa (Suras Āl' Imran 3 : 55; Al-Nisa 4:158). Iskutallaabtiisuna weligood ma dhicin.
● Muslimiinta kale waxay ku andacoodaan in Alle yahay. Sidaa darteed wuxuu badbaadiyey Masiixa aan waxba galabsan ee ka imanayay jirdilkii iskutallaabta. Halkii uu u oggolaan lahaa Yuudas, kuwa wax dilaya, iskutallaabta lagu qodbo (Sura al-Nisa '4:157). Xitaa maanta mujaahidiinta ayaa weli ku qanacsan runtii booskan.
● Qof kasta oo aqoon u yeesha sababaha diidmada Masiixa ee iskutallaabta ee ku jirta Quraanka, wuxuu ka heli doonaa dood saddexaad oo ka mid ah boorsooyinka cunsuriyada aabaha been abuurka ah: Qofna maaha, sida uu qabo Quraanka, wuxuu xaq u leeyahay si ay u qaadaan dambiyada kale ee ka hor xukunka Alle (Suras al-An'am 6:154; al-Isra '17:15; al-Fatum 35:18; al-Zumar 39:3; al-Najm 53:38 ), waayo qof kasta waa inuu weydiisto cafiskiisa gaarka ah ee Ka Quduuska ah. Sida laga soo xigtay diinta Islaamka, wax kasta oo aan beddelayn waa mid aan macquul ahayn.
● Doodka afraad ee ka soo horjeeda suurtagalnimada iskutallaabta Masiixa, sida Quraanka, waa: Alle uma baahna dhexdhexaadiye, ama dhiig daadiya, baraar iyo beddelaad si loo cafiyo dembiyada. Waxa uu madax ka yahay, wuu dhaafaa qof kasta oo uu rabo oo uu dhumiyo qofkii uu rabo (Suras al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27; Ibraahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35 : 8; al-Muddathir 74:31). Al-A'raf 7:178,186; al-Ra'd 13:33; Al-Isra 17:97; Al-A'raf 7:88,143 Al-A'raf 7:178,186; Kahf 18:7; al-Zumar 39:23,36; Ghafir 40:33; al-Shura 42:44,46).
● Fikradda shanaad, oo ka soo jeeda jahwareerka ka imanaya qarsoodiga ah, oo ka soo horjeeda dhimashada dhimashada Ciise waa kan ugu adkaysanaya. Muslimiin badan ayaa isku tixgeliya naftooda si ay ugu guulaystaan dadaaladooda. Waxay aaminsan yihiin in camalkoodii fiicnaa ay ka saareen falalkooda xun (Sura Hud 11:114). Waxay rajaynayaan in ay badbaadaan, haddii ay fuliyaan waajibaadka oo dhan oo ay amartay sharcigooda (Shareecada). Sidaa darteed, waxay u maleynayaan in aanay u baahnayn dib u bixiye ama iskutallaab. Caqiidada Islaamku waa dhaxaltooyo aan toos ahayn oo ka timid Yuhuudda Falimaha Rasuullada.
● Muslimiinta diinta ee Muslimiinta ayaa sheeganaya in Alle uu go'aaminayo qadarka qof kasta oo horey loo sii waday, markii qof walbuu weli ku jiray uurkii hooyadiis, iyo in ayan suurtogal ahayn in la baddalo go'aanka Alle. Waxay aaminsan yihiin inaan waxba ka dhicin nolosha qofka marka laga reebo waxa laga qoray buugga asalka ah ee jannada. Waxay u arkaan in loo baahnayn qof iskutallaabta ku jira iyo dhimashadiisa dhimashada dadka kale.
● Muslimiinta badankood kama warhayaan doodahaan kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, sida kooban ee qodobbadan, waxaa jira fikrado dhaqameed oo ka dhexjeeda bulshada Islaamka, in iskutallaabta Masiixa ay ku lug leedahay dhammaan Muslimiinta. Waxay u maleynayaan in iskutallaabtu ay tahay daboolka dhammaan noocyada siyaasadaha iyo diinta ee diiniga ah ee raba inay burburiyaan awoodda iyo dhaqanka dawladaha Islaamka.
Nacaybka loo maro iskutallaabteena dib u celinta wuxuu leeyahay xididada qoto dheer ee addoonsiga wadajirka ah, oo aan lagu dabooli karin macquulnimada kali. Wax badan ma caawineyso si loo caddeeyo xaqiiqada ama macnaha iskutallaabta Masiixa ee maskax ahaan. Waa inaynu u ducaynaa iyaga, inay ogaadaan runta oo ay rumaysan yihiin. Ruuxan ka soo horjeeda Masiixiga ah waa in laga adkaado lagana saaro magaca Ciise iyo jacaylka Ilaah!
Haddii aan tixgelinno diidmada iskutallaabta iyo khalkhalka isku dhafan iyo beenta ah oo ay ka mid yihiin nacaybka wadajirka ah ee ka dhanka ah Badbaadiyeha Ciise, mid ka mid ah ayaa si fudud uga dhaadhicin kara badbaadinta Masiixa ee Muslimiinta. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo ogaanaya balanqaadyada ku jira Axdiga Hore sida diyaargarowga rabbaaniga ah ee loogu talagalay badbaadada, mana ka tegayo xaqiiqada Axdiga Cusub, iyo haddii uu qaato ilaha cilmaaniga ah ama ka soo horjeeda aayadaha Quraanka tilmaamaya iskutallaabta Masiixa, sida qofku wuu ka marqaati furi karaa Bawlos rasmi ah kalsooni iyo hubin:
"Tan iyo markii aan si xaq-darro ah ugu helnay rumaysad,waxaynu leenahay nabadgelyo leh xagga Eebbe ee Rabbigeenna Ciise Masiix"
Shanta ilood ee runta ahi waa ka xoog badan yihiin todobada diin ee Muslimiinta. Aynu dilno oo ku dhawaaqno guusha Masiixa iskutallaabta xitaa aduunka oo dhan aduunka.
Muslimiin badani waxay aaminsan yihiin qadarka wax walba. Qof kasta oo muujin kara xaqiiqda ah sida ku sugan Tawreed, Sabuurrada iyo Nebiyadii ballanqaadka ballanqaaday inuu dhiman doono iskutallaabta meelkeenna, isagoo qiraya dhammaystirka saxda ah ee waxsii sheegyada ee nolosha Masiixa, wuxuu ka caawin karaa Muslimiinta inay rumaystaan Ciise wuxuu ku dhintay dhimashada. Waa in aan barnaa ballamihii 333 ee Axdiga Hore iyo dhammaystirka Axdiga Cusub si aan u hagaajino nafteena muslimiinta 'aaminnimada. Ciise qudhiisa ayaa shaydaanka iyo shaki ka dhigtay xertiisa dhowr jeer erayada: "Waa qoran tahay!" (Matayos 4:4-6-7; Luukos 18:31; 21:22; 24:46, Yooxanaa 5:46 iyo kuwo kale).
Muuse wuxuu kor u taagay masiibadii
Ciise wuxuu sharraxay baahida aan loo baahnayn iyo ujeedada uu u dhintay dhimashada Nicodemus, oo ah xubin ka cabsanaya maxkamada diinta Yuhuudda (Sanhedrin), isagoo tilmaamaya warbixinta Tawreed: Siduu Muuse kor ugu qaaday abeesadii cidlada sidaas oo kale Wiilka Aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. (Yooxanaa 3:15)
Tusaalahan waxa uu Ciise u gudbiyay maskaxdii birta ahayd ee uu Muuse amray in loo sameeyo si waafaqsan amarkii Ilaahay oo uu markaas dib u dhigo. Mid kasta oo ka mid ah dadka cabsida leh ee eegay "calaamad shar leh" ayaa isla markiiba la bogsiiyay xitaa inkasta oo qaniinyo ay qaniinto.
Muxuu Ciise isku barbardhigay abeesada, oo markasta loo tixgeliyay inuu yahay sheyga oo dhan (Bilowgii 3:1-15)? In jacaylkiisa, Ciise wuxuu u nastay dembiyadii dembilayaasha oo dhan, sidaa darteed wuxuu u muuqday inuu u egyahay sida Shaydaanka oo weli ku jira quduus, sida Bawlos uu ku qoray warqad uu u qoray Korintos: Ilaah wuxuu sameeyey isaga oo aan dembi lahayn in uu inooga dhigo, inaynu isaga ka baranno xaqnimada Ilaah. (2 Korintos 5:21)
Ciise waxa uu carrabka ku adkeeyay inaanay jirin wax kale oo badbaado ah oo loogu talagalay kuwa lagu soo qabtay khayaanada shaydaan, marka laga reebo inuu geeriyooday meelood. Wuxuu rabay oo wuxuu lahaa inuu u xanuunsado dembiyadii dembiilayaasha oo dhan on iskutallaabta ah sida beddelkeenna.
Ciise - lambarka Kormarista
Sayidkeennu wuxuu u adeegsan jiray dabaaldega Kormarista dhaqanka xertiisii oo uu u muujiyay inuu qudhiisu ahaa wan-wanka Kormarista Ilaah. Waxa uu xoojiyay qadada cuntada oo la faahfaahiyay dadka raacsan in balanqaadkii Iidda Kormarista uu dhammaystiri doono dhimashadiisa dhow (Matayos 26:26).
● Sidii markii la gowracay ka dib, dhiiggii Kormarista kowaad ayaa loo ritay albaabkii reerka reer binu Israa'iil ee reer Masar, sidaas darteed cadhada Ilaah iyo xukunka ayaa ku dhici lahaa, si la mid ah nin kasta oo isku dhejinaya iyo qoyskiisa oo ka hoos shaqeeya ilaalinta dhiigga Masiixa ayaa lagu badbaadin doonaa cadhada iyo xukunka Ilaah. Muslimiinta ayaa si cad u qeexaya qarsoodigan, waayo waxay aaminsan yihiin in dhiigga xoolaha la gowracay uu ilaalin karo (Baxniintii 12:7,13,22-23, Sharciga 16:31).
● Sida carruurtii Yacquub u cuni jireen hilibka dabiiciga ah ee Bani-Kormaridda, sida qoysaska gurigooda, si ay u helaan awood ay uga baxaan addoonsiga, si la mid ah Ciise Masiix, oo ah walaashii Kormarista runta ah, waxay rabtaa inay sii joogaan kuwa raac isaga ku xoojinaya inay ka cararaan addoonsiga dembiga iyo Shaydaanka (Baxniintii 12:3-6, 8-11, 43-48, Matayos 26:26, Yooxanaa 6:35, 48-59).
● Maadaama aysan jirin wax cafis ah iyada oo aan dhiig lagu daadin (Laawiyiintii 17:11; Cibraaniyada 9:22) mid ka mid ah hadafyada ah wanka Imaatinka Kariimka ah ee weligeed ah Ciise wuxuu ahaanayaa kafaarogudka dembiyada dhammaan kuwa isu furfuraya dhiiggiisa, haddii waxay ku kalsoon yihiin allabarigiisa, oo ay uga mahad celinayaan awoodda dhiiggiisa (Cibraaniyada 10:14).
● Ciise wuxuu u yeeray dhiigga wuxuuna daadiyey dhiigga axdiga (Bilowgii 24:4-8, Matayos 26:27-28), kaas oo uu isku xidhay kaniisaddiisa weligiis. Ku alla kii galay xidhiidhkan dhiiggiisa la xidhiidha ee rumaysadka waa inuu ahaado mid quduus ah, sida Ilaah waa quduus (Laawiyiintii 11:44). Waa inuu jecel yahay siduu Ciise jecel yahay (Yooxanaa 13:34) oo qof walba u cafi sidii Ilaah u cafiyay (Matayos 6:12, 14-15).
Waa inaan caawinnaa Muslimiinta inay fahmaan in Cashada Rabbiga ay tahay dhammaystirka cuntada Iidda Kiniisadda ee Axdiga Hore. Qof kasta oo rumaysta Lambarka Ilaah waxa lagu nadiifin doonaa denbiyadiisa oo dhan, wuxuuna la kulmi karaa Ciise oo ku nool.
Sabuurka 22 waa wax sii sheegid faahfaahsan oo ku saabsan dhibka Masiixa ee iskutallaabta. Aayadahan waxa lagu soo koobay Daa'uud ilaa 1000 CH. Saadaashooda iyo sida ay u dhammaystiraan waxay muujinayaan in ay jirto ujeedo Ilaah iyo baahi lama huraan ah oo ka danbeeya iskutallaabta Ciise.
Waxaa jira in ka badan toban waxyaalood oo ku saabsan Masiixa silcaya on iskutallaabta ku jirta Sabtigan. Qof kasta oo doonaya inuu helo hanuun si uu u fahmo oo uu aaminsan yahay isagoo isbarbardhigaya aayadahan iyo dhammaystirkooda dhimashada Ciise iskutallaabta:
6: Waxaan ka baqayaa dadka, Oo dadyowgana waan eryan doonaa 33, 41-44 29 36-37 -
7a: Kuwaas oo dhammu waa igu majaajiloon doonaan 33, 41-44 29 36-37 -
7b: waxay cayiliyaan cayayaan, madaxdoodana way gariirayaan 39 29 - -
8: Oo wuxuu isku halleeyaa Rabbiga; Rabbiguu samatabbixi lahaa, Isagaa samatabbixi doona, Maxaa yeelay, isagay ku faraxsan yihiin 43 - - -
11: Ma jirto cid caawisa 42 30-31 37 -
15: Carrabkaygu wuxuu ku dhegaystaa saqafka afkayga - - - 28
16a: waxaa i hareereeyey geeskaygii sharrowyadaydii 41-43 31-32 - -
16b: Waxay ixtiraameen gacmahayga iyo cagahayga - 24 33 19:18, 20:20
17: Dadku way ixtiraamaan oo i dulqaadaan - - 35 -
18a: Dharkaygii bay kala qaybsameen 35 24 34 23
18b: Oo dharkayga ii saran 35 24 - 24
1: Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay? 46 31 - -
Qof kasta oo ka fikira waxyaabahan Axdiga Hore ah ee dhimashada Rabbigeenna Ciise Masiix iskutallaabta ayaa fahmi doona:
● Sidee ay tahay jacaylka iyo xasiloonida Ciise ee dhibsaday markii dadkiisa aysan isaga aqoonsan, laakiin way diideen oo way ku qosleen! Bariga Dhexe ee la quudhsado waxaa badanaa loo arkaa inuu ka xun yahay geerida!
● Muxuu jirkiisa u googooyay xanuunka xanuunkiisa, laakiin ma uusan dhicin.
● Sidee ayuu Ruuxiisa u silcayaa marka Aabbihiis uu isaga ka tagay dembiyadayada aawadood! Miyaanan karaynin qaylada weyn ee uu ku dhawaaqay: "Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay?" (Sabuurradii 22:2)
Waxa ay u muuqataa mid aan caqli gal ahayn in faallooyinka qaarkood, in Ilaah run ahaantii uu ka tagay Wiilkiisa kaliya ee jecel! Laakiin Ciise been ma sheegayo. Markaasuu yidhi, Waad iga tagtay.
Mucjisooyinka aadanaha: Haddii Ilaah isaga ka tago, tani waxay calaamad u tahay in Ciise uu dembaabay!
Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu soo saari doonaa: Kii dembi la'aan ahaa dembiyadeennu wuxuu qaatay dembiyadeenna. Dembigii dunida oo dhan ayaa miisaamaya. Sababtoo ah dembiyadayada dartiis Ilaah wuu ka tagay.
Qaarkood waxay isku dayaan inay wax ka qabtaan oo ay yiraahdaan, aabaha oo keliya ayuu wejiga ka qariyay Wiilka oo wuxuu u muuqday garsoore isaga denbiyadayada dartiis.
Si kastaba ha ahaatee Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay: Runtii wuu ka tegey isaga! Unity of Trinity Quduuska ah ayaa la kala qaybiyay oo jabay. Tani macnaheedu waa cadaabta! Waa bilowgii ugu dambeeyay iyo galitaanka gudcurka. Matayos iyo Mark waxay soo sheegaan mid ka mid ah toddobada eray ee Ciise iskutallaabta. Qaylo-dhaankan ayaa wali ah xayawaan ku ah kaniisadda. Si kastaba ha ahaatee, eraygani wuxuu ku sheegaa, in ka badan ereyada kale ee Ciise, in badbaadadeenna la dhammeeyey!
Ciise ayaa marka hore qirtay: "Ilaahayow, Ilaahayow!" Yacquubna wuxuu ku dhibtooday Rabbiga hortiisa Webi Yabboq, laakiinse Rabbiguna wuxuu doonayay inuu tago. Laakiinse Yacquub uma uu oggolaanin inuu tago meeshuu ku socday, waayo, wuu eedaysnaa. Markaasuu qayliyey oo yidhi, Kuuma aan oggolaan inaad tagtaan ii daa mooyaane. Rumaysadkiisa ayaa Yacquub ka adkaaday xukunka Rabbiga oo wuxuu helay barakadiisa (Bilowgii 32:23-32). Xagga sare, Ciise ma uusan u ogolaanin Ilaaha garsoorka. Wuxuu ku foogsanaa Aabbihiis, inkastoo Aabbihiis isaga horey uga tageen. Laakiin rumaysadkiisa uguma lihin Aabbihiis. Markaasuu qayliyey oo yidhi, Ilaahayow, Ilaahayow, waxaad tahay Ilaahayga, haddaanan idin soo arkin ayaan idiin keeni doonaa, waaba intaasoo dadkayga caydh ah i dhaxalsiin lahaaye. Rumaysadka Wiilka ee jacaylkiisa iyo aaminnimada Aabbihiis wuxuu ka adkaaday xukunka Ilaah. Rumaysadkiisu waa guusha ay adkaatay dunida (1 Yooxanaa 5:4). Rumaysadkeennu waa la badbaadiyay (Yooxanaa 16:33)!
Ka dib markii uu la dagaallamay Eebaha Ilaaha Qaadirka ah, Yacquub wuxuu helay magaca cusub: Israa'iil! Magacani wuxuu leeyahay: wuxuu ku fashilmay Ilaah oo wuu ka adkaaday. Ciise waa run iyo run reer binu Israa'iil! Waxa uu ku dadaalay inuu Ilaah badbaadiyo badbaadada aadanaha oo uu ku guulaysto rumaysadkiisa! Waxa uu si dhaqso ah ugu qabsaday Aabihiis, xitaa quusto markii uu ka fogaaday isaga. Waxa uu ku tukaday daqiiqadii ka hor dhimashadiisa: "Aabbow, gacmahaaga ayaan galin doonaa Ruuxayga." (Luukos 23:46), inkasta oo uusan mar dambe arki karin Aabbaha.
Haddii aad ka fikirto balanqaadyadan Axdiga Hore iyo aragtidaada ku jira Axdiga Cusub, waxaad ogaan kartaa in Axdiga Hore horay ugu jirtay Axdiga Cusub.
Addoonsiga Cuna ee Ilaah
Waxa suurto gal ah in midda ugu muhiimsan ee ku saabsan dhimashada beddelka Ciise ee Axdiga Hore lagu muujiyay Ishacya, nebi nebiga ah. Waxaan soo jeedinaynaa dhamaan akhristayaasha buug-yarahan si ay u xusuustaan qoraalka gaarka ah ee muujintan. Waxaad ka heli kartaa awood aad u weyn naftaada, raaxo daa'im ah oo aad u hesho jawaab fiican oo diidmada Islaamka iskutallaabta.
Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeenni
ioo wuxuu qaatay murugadeennii,
weli waxaan u tixgelineynaa isaga oo Ilaah ka dhumay,
waxaana ku dhacay daalimiin.
Laakiinse waxaa isaga loo tiriyey xadgudubkeenna,
Waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna,
ciqaabkii nagu soo dejiyey nabadgelyo korkiisa ha ahaatee,
oo nabrahana waannu bogsiinnay.
Dhammaanteen sidii ido baannu u leexannay,
midkeen waluba wuxuu u noqday jidka geestiisa.
oo Rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan.
Saddexdan aayadood ayaa ah qeybta cutubka oo dhan. Ardayda Muslimiinta ah ee Casablanca ayaa lagu dhiirrigeliyay inay akhriyaan tuducdan ka hor intaan la seexin ka dibna waxa la weydiiyay waxa uu ka fekeray qofka ku saabsan qofkastaa uu ku hadlayo. Waxa uu ku jawaabay, ka dib markii uu maskax ku fekeray: "Haddii sheekadani run tahay, markaas ninkan waa inuu jacayl weyn haysto!" Muslimka dhallinyarada ah ayaa qiray qarsoodiga injiilka.
Muxuu Muslimkani u diidey sharaxaaddan fooshan ee dhibaatada Ciise iyo dhimashadiisa? Sababtuna waxay ahayd inuusan ku turunturin ereyada "iskutallaabta" iyo "wiilka Ilaah"! Looma qorin qoraalkan. Taasi waa sababta uu u fahmi lahaa waxa run ahaantii ku dhacay iskutallaabta. Ishacyaah 53 waxa uu ka hadlayaa addoonkii Rabbiga oo la dhibay oo u dhintay xukunka Ilaah oo ah beddelkiisii dadka dembigiisa. Filiboy 2:7 wuxuu caddaynayaa maragkani, oo ka tarjumaya qirashada Ciise, oo isugu yeedhay addoonkii oo dhan (Matayos 20:28; 2 Korintos 8:9; Cibraaniyada 2:14,17).
Maxay Ishacyaah 53 u sheegi kartaa iyo dhamaan Muslimiinta?
Ciise ayaa si qoto dheer isugu hoosaysiiyay isaga oo qaatay isaga oo jirradayada, khaladaadka, dembiyada, dembiyada, noocyadeena, iyo dulqaatay ciqaabkayaga xukunka Ilaah. Rabbigeenna qudhiisu wuxuu inooga dhigay dembiyadayada oo dhan. Sababtoo ah dembiyadayada, waa la garaacay, jirdilay, dhaawacmay, ugu dambeyntii waa la jajabiyay lana dilay.
Soo noqoshada, waxaa naloo siiyey nabadgelyo Ilaahay iyo bogsashada dhammaan nabraheenna, maxaa yeelay isagu wuxuu iskutallaabay naftiisa. Is-beddelid naftiisa ah waa la dhammeeyaa, damaanad-qaadayaa, sugayaa oo ansaxan karaa weligiis.
Lambarka jidhdka ah ee jirdilka ah wuxuu yeelan doonaa farcan badan oo buuxin doona qorshaha Ilaah ee badbaadada - sidoo kale Muslimiinta iyo Yuhuudda. Wuxuu badbaadin doonaa qaar badan oo ka mid ah dembiyadooda iyo xitaa kuwa xoogga badan.
Haddii aad ku xasuusato cutubka 53aad ee Ishacyaah, aayadda 1aad ilaa iyo laba iyo toban, waxaad yeelan doontaa qalab xooggan oo lagu faafiyo guusha Ciise ee diinta Islaamka! Qoraalkani waa in la qaybiyaa, si sahlan loo soo bandhigo laguna daabacaa boosteejo (iyada oo aan iskutallaabin iyo iyada oo aan weedha "Wiilka Ilaah"). Sidan oo kale waxay ka soo bixi kartaa dusha sare, diidmada iskutallaabta Masiixa.
Aayado kale oo ku saabsan iskutallaabta Masiixa ee Axdiga Hore
Raadinta ballamooyin iyo waxsii kale oo ku saabsan dhimashada Ciise ee Tawreed, Sabuurrada iyo buugaagta kuwii nebiyada, waxaad ka heli kartaa aayado dhowr ah iyo dhammaystirkooda Axdiga Cusub:
Ilaahay wuxuu xayawaanka ku daadiyey dhiiggiisii oo janno janno ah si loo daboolo qaawanaanta Aadan iyo Xaawo (Bilowgii 3:21).
Wiilka Xaawo wuxuu jilbaha madaxa ku xiri doonaa cagihiisa oo uu ku sumoobi doono (Bilowgii 3:15, Muujintii 12:4,5,15-17).
Midka geedka ku yaal wuxuu ku hoos jiraa habaaridda Ilaah (Sharciga Kunoqoshadiisa 21:22, 23; Falimaha Rasuullada 5:30)!
Waxay siiyeen khamriga (Sabuurrada 69:22; Matayos 27:33; Yooxanaa 19:29).
Gacmahaagu gacmahaaga ayaan ku geliyaa Ruuxayga (Sabuurradii 31:6; Luukos 23:46).
Daaqada macbudka ayaa dillaacday (Baxniintii 26:31-33, Matayos 27:51).
Midna laftiisa looma jabin (Baxniintii 12:46; Yooxanaa 19:33-34).
Wayna i arki doonaan, midkoodna waa la garaacay (Zechariah 12:10; Yooxanaa 19:37; Muujintii 1:7).
Seddexda lacag ee lacagta ah ee Axdiga Hore
Buugtii nebiyadii ugu danbaysay, waxaa jira sharaxaad gaar ah oo ka mid ah soddon gogo 'oo lacag ah oo Yuudas ka aqbalay markii uu qiyaamay Rabbigiisa (Matayos 26:14-16).
Oo waxaan iyaga ku idhi, Hadday idinla wanaagsan tahay, kiradaydii i siiya, haddii kalese iska daaya. Sidaa aawadeed waxay i siiyeen soddon gogo 'oo lacag ah. Oo Rabbigu wuxuu igu yidhi, Dheryasameeyaha u tuur qiimihii wanaagsanaa oo ay igu qiimeeyeen. (Sekaryaah 11:12-13)
Rabbiga ah Ilaaha Qaadirka ah wuxuu leeyahay, ‘’Saddexdan lacag oo dahab ah oo qiimihii waa hore lagu xukumay!’’. Ciise Rabbi ma? Miyaan Rabbigga axdiga noqday nin ku jira Ciise Masiix (Ishacyaah 40:3-5; 60:1-2, Luukos 2:11 iyo kuwo kale) ?! Saaxiibkiisuna wuxuu soddon sannadood oo lacag ah ku bixiyey Sekaryaah hortiis intuusan iman ka hor.
Xaqiiqda weligeed ah ayaa lagu qariyay qoraallada Axdiga Hore iyo aayadaha ku xusan Axdiga Cusub, oo markhaati u ah dhimashada Ciise iskutallaabta. Qof kasta oo runtii raba inuu wax barto wuxuu awoodi doonaa inuu fahmo. Wicitaan gaar ah ee buugga ugu dambeeya ee Kitaabka Qudduuska ah ayaa sidoo kale loogu talagalay Muslimiinta iyo Yuhuudda: "Kii dhegta maqla, ha maqlo waxa Ruuxu ku leeyahay kaniisadda!" (Muujintii 2:7 iyo kuwa kale)
Nasiib daro dad badan oo Muslimiin ah ayaa ka xishoonaya in ay aqbalaan warbixinta Masiixa iyo dhimashadiisa iskutallaabta oo ah taariikhda runta ah. Waxay dhoolacadeeyaan oo ka fekeraan: Masiixiyiinta saboolka ah! Waxay si fiican u neceb yihiin, laakiin waxay ku lumayaan lamadegaankooda iyo fikradahooda. Waxay arkeen seddex Ilaah oo halkii mid ka mid ah oo ay u malaynayeen in mid ka mid ah iskutallaabta lagu qodbay! Inta badan Muslimiinta ayaa ku qanacsan in Masiixa aan iskutallaabta lagu qodin.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan Muslimiintu maaha kuwo si dhab ah u fikiraya. Qaarkood waxay diyaar u yihiin inay dhagaystaan warbixinnada iskutallaabta Ciise ama inay daawadaan iyaga filimka. Laba Muslimiin ayaa ku arkay filimka Crusade Campus ee nolosha Ciise. Dabadeed mid baa u sheegay mid kale: "Muxuu hadalkayagu mar walba sheeganayaa in Masiixu aan iskutallaabta lagu qodnayn? Indhahayga ayaan arkayay isaga oo iskutallaabta iskaga deldelaya oo dhimanaya!" Mar kasta oo suurtagal ah, waa inaan furnaa mid ka mid ah afarta xisaab ee iskutallaabta Masiixa oo buugga ku qora gacanta Muslimka xiiseeya, si uu ugu akhriyo isaga oo si weyn ugu akhriyo Ciise erayadan.
Ciise wuxuu naftiisa baray:
Wiilka Aadanahu uma iman in loo adeego laakiin inuu adeego, oo naftiisana wuxuu u bixiyo sida naftiisa oo kale. (Matayos 18:11; 26:28; 26:63-64) Qiyaastii 80 jeer afartiisa Injiilkiisa Ciise wuxuu isugu yeeray "Wiilka Aadanaha". Inkasta oo uu u muujiyay, waxa uu u muuqday sida Rabbiga iyo xaakinka adduunyada sida ku qoran Daanyeel 7:13-14, wuxuu ku adkeeyay bini-aadamnimadiisa iyo dhaliishiisa isagoo adeegsanaya addoonto sharaf leh isla waqtigaas. Siduu sidaas samaynayo wuxuu u beddelay heerarka dhaqameedyada oo dhan: Midka ugu horreeya waa inuu tixgeliyaa naftiisa, ugu dambeynna waxaa loo ballan-qaaday in uu noqon doono marka hore. Kan ugu weyn waa inuu u sujuudaa oo uu noqdaa kan ugu hooseeya, oo kuwa culusna waa la kicin doonaa jacaylka Ilaah (Matayos 20:26-27; 23:11-12, Markos 9:35, 10:44, Luukos 22:26-27).
Qof kasta oo raacaya Ciise wuxuu noqon doonaa addoon, ma aha Master! Tani waa fikrad cusub oo feker ah, oo ka soo hor jeedda fikirka Islaamka. Ilaahayagu waa is-hoosaysiiye, laakiin Alle waa ku faanayaa (Sura Al-Hashr 59:23). Khadka Islaamka ayaa si joogta ah u sarreeya, khadka Masiixa iyo kuwa raacsanba si joogta ah ayuu isu dhejiyaa. Iskutallaabta Masiixa waxay u baahan tahay isbeddel ku yimaada mawqifkayaga, haddii kale waxay naga dhigaysaa mid ku turjumaya.
Islaamku, argagixiso oo diyaar u ah inuu naftiisa u huro si uu u xoreeyo dalkiisa inta badan wuxuu naftiisa ku magacaabaa "soo celiye" (fida'i). Masiixa waa furaha runta ah (faadi) oo naftiisa u huray si uu u xoreeyo oo dhan, isaga oo raacaya isaga, oo ka yimid xukunka Ilaah, awoodda dembiga, khiyaamooyinka shaydaanka ee Shaydaanka, iyo dhimashada weligeed ah. Ciise wuxuu ka iibsaday xorriyadayada oo dhan awoodaha diidan oo isku xidhan. Isagu waa addoonkii kan la nebcaaday, Iyo kii sharka ahaa ee reer binu Israa'iil. Jacaylka Masiixi iyo jacaylku waa furaha lagu fahmo dhimashadiisa dhimashada iskutallaabta.
Waxa lagama maarmaanka u ah Masiixa in uu xanuunsado
Mawduucyada qaar ee ku sugan injiilka oo ka tarjumaya dhaleeceynta iskutallaabta waxay noqon kartaa caawimo Muslimiinta xagjirka ah!
Markuu markhaati ka ahaa Butros (Matayos 16:16) Ciise ayaa sharfay afkiisa xertiisa, laakiin waxa uu doonayay inuu sii xoojiyo aragtidiisa ku saabsan Masiixa xukunka leh ee runta ah ee addoonkii Ilaah ee silcaya. Wuxuu isaga u sheegay in uu lahaa inuu Yeruusaalem tago oo uu xanuunsado, oo uu u dhinto si uu u sara kiciyo maalinta saddexaad (Matayos 16:21).
Si kastaba ha ahaatee, Butros, waxa laga cabsi qabay. Wuxuu u maleynayay inuu Ciise maskaxda ka xanuunsaday, wuxuuna ku dhiirigeliyay: "Ilaah ha ka ilaaliyo sharkaas oo kale, tanina weligeed ma dhici doonto!" (Matayos 16:22). Ciise intuu eegay, oo wuxuu u yeedhay Shayddaanka, oo wuxuu ku yidhi, Gadaal iga mar, Shayddaan yahow, waayo, waxyaalaha Ilaah kama fikirtid, waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka. 16:23).
Sidee ayay u dhici kartaa isbeddel deg-deg ah ee wada hadalka Ciise iyo afhayeenka xertiisa? Butros wuxuu isku dayay inuu hor istaago iskutallaabtii Ciise, ujeedada iyo ujeedkii uu u noqday nin. Ciise markiiba wuxuu uqaaday codka Shaydaanka erayada rasmiga ah ee rasmiga ah, sababtoo ah Shaydaanku waxa uu necbahay wax ka badan iskutallaabta wiilka Ilaah, oo ah meeshii guuldaradii dhammayd.
Erayada isku midka ah ee soo noqnoqda ayaa sidoo kale lagu hagaajin karaa Muxammad, kuwaas oo Alle u ogolaanaya wax kasta inuu badbaadiyo wiilka Maryan isaga oo ka soo jeeda iskutallaabta.
Ciise waxa uu saddex jeer ku sharaxay xertiisa in sababta uu u imaanayo uu u fulin lahaa siliciisa iyo dhimashadiisa (Matayos 16:21; 17:22-23; 20:17-18) waxaannu u soconnaa Yeruusaalem, Wiilka Aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaaddada sare iyo culimmada; Waxay ku xukumi doonaan dhimasho, oo quruumaha madaxdoodii ayaa loo dhiibi doonaa, oo wuxuu ku dhufan doonaa hareeraha iyo iskutallaabta. Maalinta saddexaadna waa la sara kicin doonaa (Matayos 20:18-19)!
Ciise wuxuu ku soo dhowaaday Yeruusaalem, intaa ka badan wuxuu ogaaday faahfaahinta dhibaatada iyo dhimashada, oo ay ku jiraan sarakiciddiisa. Isagu waa ka sii weyn yahay nebi. Wuxuu ahaa ereyga Ilaah oo shakhsi ah. Waxa uu had iyo jeer la hadlay Aabbihiis oo jannada ku jira, kaas oo isaga u muujiyay dhacdooyinka mustaqbalka.
Nin caadi ah oo fikirka ah ayaa laga yaabaa inuu diido: "Haddii Ciise waxaas oo dhan ogaa, maxaad u carari jirtey dibedda ama u haajiray, sida Muhammad oo Makka u tagay Madiina? Maxay Ciise u dhuuntay ama isma dhaamin? Baahida rabbaani ah ayaa isaga baxay! Waxa uu ogaa in aanay jirin badbaado bini-aadanimo ah iyada oo aan dhimashadiisa dhiman. Wuxuu addeecay rabitaanka Aabbihiis ee jannada ku jira ilaa geerida! Waxyaabaha lagama maarmaanka ah waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh oo jahwareer ku ah muslimiinta
Ciise oo ku sugan Gethsemane
Ciise wuu ka baqay, wuu ooyay, oo si qallafsan ayuu u naxay markii dhimashadiisa soo socota, markii uu ku tukaday Beerta Beerta ah ee derbiyadii Yeruusaalem. Xertiisii ayaa la seexday, oo way ku caawin kari waayeen baryootankoodii. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku tukaday: "Aabbahay, haddii ay suurtagal tahay, koobkan waa iga tagaa, si kastaba ha ahaatee, ma rabo, laakiin sidaad doonayso." (Matayos 26:39)
Ninka Ciise oo nafta iyo jidhkaba ka gooyay xukunka Ilaah oo ahaa in uu geeriyoodo dhimashadiisa. Laakiin Wiilka Ilaah baa ka adkaaday doonistii jidhka, oo wuxuu si daacad ah u dilay kan doonaya kan Ilaah u jeclaaday. Iskutallaabta Ciise ma ahayn mid fardoole ah, ama maareyn maareyn ah, laakiin dagaal jannada ka soo horjeeda cadaabta. Ciise waxa uu aqbalay rabitaankii aan u jeclaa Aabbihiis wuxuuna ku tukaday wakhti labaad iyo saddex jeer: "Aabbow, haddii aysan suurtagal ahayn in koobkan la qaado, hadaanan cabbin, waa la samayn doonaa." (Matayos 26:42)
Dhab ahaan "Islaam" ama is-dhiibid buuxda ayaa muuqday in tukashadan tukashada Ciise. Qofna kuma qasbin inuu is dhiibo rabitaanka Aabbihiis; Waxa lagu qasbay jacayl aan qallafsaneyn oo lagu kalsoonaan karo oo ah aaminka ruuxiga ah ee Aabihiis.
Xumida xerta iyo sabirka Ciise
Xertu waxay soo mareen jaamacadda ugu fiican ee dunida oo dhan iyadoo tababar la qaadanayo ay joogaan macallinka ugu fiican. Markii imtixaanka yimid, sida Ciise loo qabtay, dhammaantood way ku guuldareysteen imtixaanka ugu dambeeya. Oo waxay ku carareen magaaladii gudcurka; Butros wuxuu ku dhuftay askarigii seeftiisa, oo wuxuu inkiray inuu Sayidkiisa iyo Sayidkoodu garanayo isaga (Matayos 26:56,69-75).
Sidee ayuu Ciise u dhaqmaa? Sideebuu u daweynayaa fashilka uu jecelyahay? Markaasuu u duceeyey markuu iskutallaabta ku qodbo: ‘’Aabbow, cafi, waayo, garan maayaan waxay samaynayaan.’’ (Luukos 23:34) Waxa uu dhammeystiray badbaadada aduunka oo kali ah, oo wuxuu ku qayliyey dhammaadkii naxdintiisii: "Waa dhammaatay!" (Yooxanaa 19:30)
Waqtigan xaadirka ah wuxuu sidoo kale degay xaqiiqada uu xertiisa ku dhacay isagoo aan ogeyn. Wuxuu badbaadiyey dunida oo dhan, oo ay ku jiraan dhammaan Yuhuudda iyo Muslimiinta oo dhan, iyo badbaadintiisa. Ciise uma baahna inuu mar kale u dhinto Muslimiinta ama Yuhuudda! Waxa uu jecel yahay oo uu jecel yahay oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa necbahay. Wuxuu sugaa iyaga.
Sarkaalka masuulka ah ee Roomaanku wuxuu doonayay in uu hubiyo in "Boqorka Yuhuudda" ay si dhab ah u dhinteen waxaana ku dhuftey feeraha hoostiisa saxda ah ee qalbigiisa. Diidmadaasi waxay ahayd inay ku filnayd inuu Ciise dilo. Si kastaba ha ahaatee, jirdilkii iskutallaabta ayaa mar hore soo afjaray ujeedka. Duufaanta ayaa waxay u adeegsatay caddaynta dhimashada dhabta ah ee Ciise. Sidee Muxammad u odhan karaa, "iyagu ma ay dilin, iskutallaabta ma iskutallaabin, oo kaliya ayuu u muuqday" (Sura al-Nisa '4:157)?
Marka Ciise ka soo sara kacay kuwii dhintay iyo muuqan jirkiisa ruuxi ah oo uu xeradiisa qarsoon iyo cabsida leh ka dib albaabbada albaabbada, Wuxuu u ma ayan ku canaanto ay u duulaan, laakiin salaan iyaga, "Nabadu ha idinla joogo!" (Yooxanaa 20:19) Marka aanay fahmin xaqiiqda dhabta ah, wuxuu tusay nabarradii gacmihiisa iyo cagaha, iyo nabarka dhinaciisa (Yooxanaa 20:20). Markaasay ogaadeen in iskutallaabta lagu qodbay Ciise oo dhab ahaantii noolaa, oo dhex taagan yahay!
Dabadeed Rabbiga kor u kacay ayaa bilaabay inuu baro qorshaha badbaadada Axdiga Hore. 40 maalmood gudahood, wuxuu iyaga tusay Tawxiidka, Sabuurrada, iyo nebiyadii in Masiixu uu u xanuunsan lahaa si uu u galo ammaantiisa (Luukos 24:26-27). Markaasuu garbihiisa saaray, wax walbana isagay u sheegeen, iyagoo leh, Waa qoran tahay, ‘’Waa in Masiixu silco, oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco’’. (Lukos 24:46)
Ciise qudhiisa ayaa nagu hoggaamiya habka saxda ah ee u adeegidda isaga Muslimiinta. Marka muslimiintu raadsadaan, ka dib markii waqti xiiso leh oo ku saabsan farriinta ku saabsan Masiixa, ka cararaya oo ha ku nasanin rumaysadkooda, sida xerta ugu horeysay ee Ciise ay sameeyeen: Markaas hawlahayagu waa inaan dib u soo celinno oo bilaabno casharrada Kitaabka Quduuska ah, sida Ciise oo xertiisa u sameeyay!
Ka dib markii Ciise diyaariyay Rasuulladiisa in lagu subkay Ruuxa Qudduuska ah oo ka dhashay dhimashadiisa dhimashada iskutallaabta, xertiisiina waxay weyddiiyeen, "Rabbi, ma waxaad u dhisi doontaa boqortooyada Ilaah sida Masiixa reer binu Israa'iil maalmaha soo socda?" Waxay wali ku beegsanayeen boqortooyo diimeed-siyaasadeed! Waxay fahmi waayeen farriinta Ciise oo ku saabsan boqortooyo ruuxi ah. Ka dib 40 maalmood oo tababar oo gaar ah by Rabbi naftiisa kor u kacay, waxay ku guuldareysteen imtixaanka mar kale! Waxay wali ka fekerayeen ereyada adduunka, siyaasad ahaan iyo aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, xilligii ay heleen awoodda Ruuxa Quduuska ah, aragtidooda iyo wacdintoodii ayaa badalay. Waxay kasbadeen si ay u muujiyaan runta jacaylka. Waxay u sheegayaan dhagaystayaasha naxdinta leh in dhammaantood ay ahaayeen kuwa dila, iyadoo gacan ka helaysa askarta Roomaanku ay ku garaaceen Ciise, Masiixa, iskutallaabta (Xeerka 2:23).
Muxuu dadkii badnaa ee argagaxay ee Yuhuudda ka jawaabay? Waxba! Ma aha kelmad keliya! Oo midkoodna kama uu tegin, oo wuxuu ku yidhi, Nabad, oo sooma aan gelin isaga, oo iskutallaabta kuma aannu reebin. halkii ay ka aamuseen. Aamusnaanta Yuhuuddu waa caddaynta xaqiiqda taariikheed ee Ciise iskutallaabta lagu qodbay. Haddii ay heleen fursad yar oo ay u diidaan dembiga iskutallaabtaas, waxay ku qayliyeen oo qayliyeen. Hase yeeshee, dhammaantood way iska aamuseen. Markaasay qayliyeen iyagoo leh, Iskutallaabta ku qodob, iskutallaabta ku qodob. (Matayos 27:22-26; Yooxanaa 19:15).
Butros iyo Rasuulladu waxay ku celiyeen qirashadooda dhowr jeer oo ay arkeen xaqiiqada dhabta ah ee Masiixa iskutallaabta lagu qodbay ka hor dadkii badnaa ee macbudka, ka dib bogsiinta nin curyaan ah iyo horjeedka Sanhadriinka. Ma jiro mid ka mid ah wadaaddada sare iyo macallimiinta sharcigu ka tirin karaa markhaatifurintooda, waayo dhammaantood waxay ka qayb galeen iskutallaabtii Ciise oo markhaati furan oo muuqda (Falimaha Rasuullada 2:36; 3:10; 7:52 iyo kuwa kale).
Qof kasta oo fahamsan natiijooyinka Rasuullada ee toddobada aayadood oo ku saabsan Falimaha Rasuullada iyo jaahilnimada caqabadaha Yuhuuddu waxa ay ka heli kartaa caddayn xoog leh halkaas oo ah xaqiiqada iskutallaabta Ciise. Muslimiinta ayaa fahamsan in aan ninna u ogolaan doonin in loo yaqaano dilaal haddii aan si cad loo xukumay ee dilka! Toddobadan aayadood ayaa sidan oo kale muujinaya xaqiiqada iskutallaabta Masiixa.
Waa inaan sidoo kale aqoonsanno in rasuulladu aanay awoodin inay markhaati ka dhigaan iskutallaabta Ciise iyo sarakiciddiisa sida guul weyn ee Ilaah marka laga reebo Ruuxa Quduuska ahi soo galay qalbigooda. Way iska aamusi lahaayeen, wayna garan waayeen wixii dhacay, wakhti dheer.
Markay muwaadiniinta u maraan sharraxaadda iyo waxbarashadu waxay noqon doonaan wax yar oo la isticmaalo illaa Ruuxa Quduuska ah uu maskaxdooda u jeediyo, sida Dr. Martin Luther uu qoray, "waxaan rumaysanahay in aanan rumaysan karin Ciise Masiix, Rabbigaygiiyow, ama u yimaaddaan isaga laakiin Ruuxa Quduuska ahi wuxuu iigu yeedhay injiilka, wuxuu iigu sharaxay hadiyaddiisa, oo iigu nadiifiyey, iigana i xajiyey iimaanka saxda ah, sida uu ugu yeerayo oo wuxuu ururiyaa dhammaan muwaadiniinta Masiixiyiinta ah ee dhulka jooga kuna ilaaliya midigta midaysan iimaanka."
Salaadda loogu talagalay diyaarinta iyo furitaanka maskaxda Muslimiinta iyo dib u cusboonaysiinta qalbiyadooda iyada oo loo marayo Ruuxa Qudduuska ah ayaa ah mid muhiim u ah sida markhaati xaq ah oo ku saabsan Badbaadiyaha soo kordhay, gaar ahaan diyaar u ah inuu la kulmo macnaha muslimiinta.
Muslimiin badan ayaan rabin inay dhagaystaan markhaatiga Kitaabka Quduuska ah sababtoo ah waxaa lagu baray in Kitaabka Quduuska ah la been abuuray. Waayo, saaxiibadaa khaldan ee khaldan, gaar ahaan haddii ay yihiin aqoonyahanno, waa in aan samaynaa sida ugu fiican ee aan u helno tilmaamaha ku saabsan iskutallaabta Masiixa ee ilaha maadiga ah, oo aan wax yar ama yar ku lahayn barashada diinta.
Laba taariikhyahan oo caan ah ayaa waxay soo sheegeen dhimashada Ciise, ina Yuusuf oo reer Naasared. Mid ka mid ah waa Tacitus buugiisa, Annals, kan kalena waa Flavius Josephus oo buugiisa ku jira, Dagaalkii Yuhuudda. Josephus ayaa si faahfaahsan uga warramay Ciise iyo iskutallaabtiiskiisa ku jira Bilaatos oo ku xusan foornada VIII, cutubka 3:3. Labada qoraxeedba waa kuwo caalami ah oo la aqoonsan yahay waxayna caawin karaan Muslimiinta tooska ah inay dib u furtaan xaqiiqada dhimashada Ciise.
Isla sidaas oo kale waa Talmud. Yuhuuddu waxay degganaayeen waqti ka mid ah Beljamka dhexdooda oo Masiixiyiin ah waxayna ku qasbanaadeen inay jawaab ku bixiyaan markii lagu eedeeyay iskutallaabta Ciise. Waxay qorteen Ciise, wiilkii Yuusuf, waa dhintay. Qoraalkan Talmud wuxuu ka soo horjeedaa diidmada Ciise ee xagjirnimada xagjirnimada kuwaas oo go'aansaday "magaciisa waa la illoobi doonaa oo laga tirtirayaa xusuusta oo dhan, mar dambe magaciisa lama sheegi karo dadkeena!"
Qoraal qarsoodi ah oo ku saabsan Ciise ayaa laga heley qoraalka Palladium ee Rome. Iskutallaab weyn ayaa lagu xardhay derbi iyo nin leh madaxa dameerka ku dul xidhan. Under iskutallaabta ah askari Roomaan ah ayaa lagu arki karaa jilbaha iyo caabudi lahaa iskutallaabta lagu qodbo halka kuwa kale ee Roomaanka ah ay ku raaxaystaan isaga. Sawirkaan Ciise ayaa si cad u muujinaya in iskutallaabtii Ciise ee horeba loogu yaqaanay kuwa Roomaanka ah ee Roomaaniga oo ay si cad uga wada hadleen, maxaa yeelay askartii Roomaanku waxay bilaabeen in ay rumaystaan Badbaadiyahooda ah ee ay dileen.
Waxaa jira tilmaamo dheeraad ah oo ku saabsan xaqiiqda taariikhiga ah ee iskutallaabta Ciise oo samayn kara qof kasta oo Muslim ah. Intii lagu jiray xukunkii Jamaal Abd Al-Nasser ee Masar, dabayaaqadii Pope John XXIII wuxuu isku dayay in uu caddaado Yuhuudda oo maanta ka soo eedaysay dilkii Ciise. Hase yeeshee, madaxweynaha Masar ayaa si bareer ah uga jawaab celiyay Pope on TV iyo warbaahinta kale: "Waan fahamnay qorshahaaga, waxaad dooneysaa inaad u cadeyso dhamaan Yuhuudda iyo Israa'iil, marnaba ma oggolaan doono, waan ognahay kuwa ku dilay Masiixa: Yuhuuddu waxay iskutallaabta ku qodbeen Isaga iyo cid kale oo kale! " Hogaamiyaasha Muslimiinta, Kiniisadaha Masiixiga, wadaaddada, wadaadada iyo dadka kale ee masuulka ah ayaa dhoola cadaa. Waxa cad in, si ay u dhalleeceeyaan Israa'iil, Jamal Abd Al-Nasser diyaar u ahayd inuu qirto in Quraanka la khaldamay!
Sida ku xusan sharciga Sharciga, jihaadiyeyaasha diimeed ee Jaamacadda al-Azhar ee Qaahira ama xarumaha kale ee Islaamiga waa in ay soo bandhigaan oo ay saxeexaan qoraalka Nasser gudaheeda hal bil gudaheed, hadii kale waxay qaadanaysaa ansax guud. Si kastaba ha ahaatee, culimadu waxay ka cabsi qabeen kaligii taliyihii ama maya, ma aysan rabin in reer binu Israa'iil lagu caddeeyo. Mawaadiicda muhiimka ahi waxay tahay in digniinta Islaamku ay aamusnayd, sidaas awgeed, mabaadi'da Shareecada, waxay si aan toos ahayn u qirtay inay ogaadeen in Masiixa iskutallaabta lagu qodbay. Hase yeeshee, ma aqbali karaan arrintan si daacad ah, maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa aayadda Quraanka. Si kastaba ha ahaatee, si ay u xukumaan reer binu Israa'iil, waxay aqbaleen sharka ka yar!
Maanta dadka Yuhuudda ah ee dhexdhexaad ah iyo kuwo dhexdhexaad ah, kuwaas oo iska kala fogaanaya jacaylka Yuhuudda awoowayaasha, ayaa ku nool dalka Israa'iil. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa isku dayay in ay sahamiyaan astaamaha Ciise si ay usoo celiyaan walaalkoodii weynaa ee walaalkiis ah. Waxay xaqiijiyeen dhalashada Ciise ee "Naaseret", waxayse la yaabeen, haddii ay noqon karto xaalad kufsi by askari ka mid ah awoodda Roomaanka Roman. Waxay ka wada hadleen waxbaristiisa iyo mucjisooyinka. Laakiin maxay u qori jireen dhimashadiisa? Miyey isaga diidaan iskutallaabtiisa sida Muxammad? Maxay ahayd jawaabtoodii su'aashaas? Waxay ku tilmaameen dilka Ciise inuu yahay qalad sharci! Ma waydiisanayaan xaqiiqda ah ee iskutallaabta lagu qodbay. Dhamaan Yuhuudda oo leh hal cod wuxuu diidi lahaa iskutallaabtiisa Ciise inuu naftooda u huray culayskii 2000 ee taariikhdooda, haddii ay jirtey suurtagal yar. Laakiin waxay og yihiin in xaqiiqooyinka taariikheed ee aan la beddeli karin oo ay naftooda u hadlaan.
Haddii aad barato hadalladaha kala duwan ee Muhammad ee ku saabsan dhimashada 'Isa ee Quraanka, waxaad ka heli kartaa is burin iyo adkayn sii kordhaysa ee dabeecadiisa ku wajahan corss. Waxay ka bilaabantaa aqbalaadda aqbalaadda dhimashadiisa oo waxay tagtaa caqabado, laakiin waxa ay diiddan tahay dhimashadii Ciise. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira jilicsanaanta qaarkood ee aayadahan iyo sidoo kale talooyin macquul ah iskutallaabta Ciise, taas oo aan halkan u soo bandhigi karno markhaatigaaga Muslimiinta.
Burburkii nebiyadii reer binu Israa'iil ayaa la soo bandhigay oo cambaareeyay toban jeer Quraanka (Suras al-Baqara 2:61,87,91, Āl 'Imran 3:21,112,181,183; al-Nisa' 4:155,157; al- Ma'ida 5:70). Mid ka mid ah tixraacyadaas ayaa sheegaya:
‘’Nabi Ciise Ibnu maryama Mucjizaad cad cad, waxaana ku xoojinay ruux daahir ah Qoomkiisa (Waqtigan) ka hor, saas ma aha ee Eebe wax walba waa karaa waana Adkaade Falsan. dilaan?" (Sura Al-Baqara 2:87)
Aayaddan oo kale ayaa lagu qoray wakhtigii Muhammad wakhtigii Medina. Isagu ma diidayo dilalka soo noqnoqda ee nebiyadii Axdiga Hore, laakiin waxay u soo bandhigeen eedeeymaha Yuhuudda. Hase yeeshee, kama fekereynin in wiilka Maryan la dhagxiyey, inkastoo uu si toos ah ugu xidhay nebiyadii la toogtay (Suras al-Baqara 2:87, Al-Nisa '4:157). Caqiidada Qur'aanku waxay u muuqataa inay u baahan tahay dhimashada Ciise sidoo kale.
Ciise dhimashadiisa Quraanka
Waxaa jira aayad khaas ah oo ku jirta Sura Maryam oo ku dhowaad la fahmi karo in ay tahay markhaati Masiixi ah ee Quraanka. Aayaddan "Isa waxa uu naftiisa ku soo bandhigayaa Quraanka wuxuuna naftiisa ku soo koobayaa hal jumlad:
"Nabadgelyo baa igu dhacay maalintii aan ku dhashay, maalinta aan dhimanayo iyo maalinta aan soo diri doono." (Sura Maryam 19:33)
Muxammad waxa uu shaaca ka qaaday ogolaanshaha this 'Isa si ay u caddeeyaan hooyadiis Mary iyo in ay muujiyaan in wiilkeedu ma ahaa ilmo sharci darro ah. Dhalashadiisuna waxay ku hoos jirtay raxmaddiisa iyo nabaddiisa. Halkaan waxaa ku soo kordhay ereyga Ilaah iyo Ruuxiisa ee Masiixa ku jira Quraanka (Sura Āl 'Imran 3:45; al-Nisa' 4:171; Maryam 19:20; al-Anbiya '21:91 ; Al-Tahmim 66:12 iyo kuwo kale). Sidoo kale waa sheeko ku saabsan gabayada malaa'igta ee ku taal barta Beytlaxam (Luukos 2:14).
Masiixa wuxuu u muuqdaa Quraanka sida nin nabad ah. Isagu ma uusan dembaabin (Sura Maryam 19:19), Ma ahayn mid shaydaan ah (Sura Maryam 19:32). Ma uusan ka qeyb qaadan dagaalka, dagaal ama khudbado colaad ah. Masiixu wuxuu ahaa mid nabdoon, taas oo macnaha macnaha erayga "Muslim". Isagu waa Muslim kaliya oo run ah, Amiirka nabadda.
Aayaddan (Sura Maryam 19:33) ayaa sidoo kale muujinaysa caddayn cad oo cad oo ku saabsan dhimashada Masiixa. Ereyadani waxay markasta ku cadeeyeen in ay turjumaad u yihiin mufasiriinta Muslimiinta. Waxay ku tiri jireen macnahooda oo waxay ku qoray, shaki la'aan, 'Isa waa inuu dhiman lahaa, laakiin maaha noloshiisa ugu horraysa ee dunida, laakiin kaliya ka dib markuu yimaado labaad. Wuxuu ku soo laaban lahaa si ay u baabbi'iyaan marka hore ka gees ah, ka dibna dilo dhammaan doofaarrada iyo baabi'iyaan dhammaan iskutallaabta. Kadib wuxuu guursan lahaa, caruurna yeelanayaa, oo dhammaanba ragga (oo ay ku jiraan dhammaan Masiixiyiintu) diinta Islaamka. Kaliya markaasi wuu dhiman lahaa! Dhimashadiisa waxay noqonaysaa "aqoonta saacadda ugu dambeysa" (Sura al-Hujurat 49:61). Ka dib markii uu aasaastay Muhammad ee Medina, Ilaah qudhiisu wuxuu ka muuqan doonaa maalinta xukunka, Muhammad iyo Masiixa ka soo sara kiciyey kuwii dhintay oo wuxuu ku dhejiyey carshiyo si ay uga qayb qaataan xukunka aduunka.
Fahmida naxwe ahaaneed waxay kaa caawin kartaa inaad ka gudubto baqshiishadan. Aayadda 23 kuma koobna ereyga "wadaad" oo keligiis bedelaya 'dhimashada Ciise' mustaqbalka fog, laakiin halkii ay ka hadlaysaa ku dhowaad, dhimashada dabiiciga ah, qaabka dabiiciga ah ee dhalashada, dhimashada iyo sarakicidda. Dhammaan tafsiiro kale waa riyooyin ama been ah si ay u qarsadaan xaqiiqada dhimashada Ciise.
Waxaa jira aayad la mid ah Sura Maryam oo ku saabsan Yooxanaa Baabtiisaha (Yahya), kaas oo hoos u dhigaya 'Isa ilaa heerka Yahya. Halkan, Jibril, Rasuulka Alle yidhi, ‘’Nabadgalyo korkiinna ha ahaato maalinta la dhalay iyo maalintuu dhiman iyo maalinta la soo bixin isagoo nool’’. (Sura Maryam 19:15)
Yooxanaa waxaa loo yaqaanaa in la gooyay oo la aasay. Xaqiiqadani waxaa lagu sharaxay xaalad la mid ah dhacdooyinka sida 'Isa': marka hore dhalashada, ka dib dhimashada, iyo ugu dambeyntii sarakicidda. Si kastaba ha ahaatee, kiisaska Ciise ayaa faallooyinka si ula kac ah u buriyay amarkan si ay u tirtiraan suurtogalnimada dhimashada iskutallaabta.
Malaha Muxammad wuxuu soo bandhigay 'Isa iyo Yaxya si wadajir ah loo muujiyo' Isa ma noqon doono dabiicadda rabbaaniga ah. Laakiin inkasta oo uu u ogolaado 'Isa is barbar dhigo sidii uu u muujin lahaa jannada' waxyiga jannada ', halka Yahya uu soo bandhigay oo kaliya Jibril. In Qur'aanka 'Isa ayaa ka sarreeya Yahya. Wiilka Maryan wuxuu u muuqdaa sida ruuxa Alle ee jidhka iyo ereygiisa, taasi waxay noqotay mid khafiif ah, halka Yahya uu ahaa ilmo caadi ah oo ka dhashay waalidiin la yaqaan.
Sida laga soo xigtay Quraanka 'Ciise wuxuu ku noolaa dembi la'aan (Suras Āl' Imran 3:45; Al-Nisa' 4:171; Maryam 19:19 iyo kuwo kale). Sidaas daraaddeed isagu uma uu dhiman indhahiisa. Tani waxay fasiraysaa tarjumaadda uu qaatay dembiyadii dadka oo dhan naftiisa oo ku dhintay meeshiisi, isaga oo isku hallaynaya Abuuraha iyo adduunka iyada oo loo marayo geeridiisa dhimasho. In Quraanka 'Ciise wuxuu xaqiijinayaa in nabadda Eebe ku nasato isaga xitaa maalinta uu dhintay!
Midka ugu khiyaanada badan
Aayad kale oo muujinaysa horumarka Muxammad ee dhimashada Masiixa waxaa laga heli karaa Sura Āl 'Imran:
"Waxay khiyaaneeyeen, Alle waa la khiyaaneeyey, Alle waa kan ugu khayr badan khaa'imiinta, maxaa yeelay wuxuu yidhi:" Isa, waan idin sii daynayaa inaad dhinto oo i koriso." (Sura Āl 'Imran 3:54-55)
Sida laga soo xigtay Qur'aanka, dadka khayaaliga ah waxay ahaayeen Yuhuudda. Waxay isku dayeen inay si qarsoodi ah u dilaan 'Isa, laakiin Allah wuxuu ku arkay qorshahoodii hore ee dilka. Si kastaba ha ahaatee, Alle ha ka badnayn dhammaantood, wuxuu u ogolaaday 'Isa oo ka tagay si nabad ah kadibna wuxuu kor u qaaday samada ilaa uu joogo.
Maxay ahayd "tan ugu badan ee dhammaan khibradaha" ee halkan lagu tilmaamayo by Eebe by Qur'aanka laftiisa? Wuxuu Masiixa ka badbaadiyey dhimasho rabsho leh dhagax ama iskutallaabta! Sidan oo kale Muxammad waxa uu isku dayay inuu baabi'iyo iskutallaabta Masiixa iyada oo aan si fudud loo sheegin. Saddex weedhood oo la xidhiidha "trickthropic trick" waxay ka soo baxaan ereyada kale ee aayaddan.
Si loo baabi'iyo iskutallaabta Masiixa ayaa ugu yeeray Alle ugu naxariista badan! Kitaabka Quduuska ah wuxuu adeegsadaa weedhdan xun ee "abeesada" ee janno (Bilowgii 3:1)! Isagoo la kulmay iskutallaabta, ruuxa Islaamku waa inuu qirto cidda dhab ahaantii ahayd iyo waa! Alle waa inuu naftiisa u muujiyaa iskutallaabta "ugu fiican ee khiyaanada oo dhan" (khair-ul-maakirin)! Waa in aan fahamnaa cawaaqibyadii ugu dambeeyay ee caddaynta Quraanka ee nafta iyo asxaabtayda. Efesos 6:11-20, Bawlos wuxuu ku amri doonaa dhammaan addoommada Masiixa inaanu isku dayin inuu jebiyo awoodaha iyo xikmadiisa, laakiin inuu ku tukado, rumaysto oo u adeego oo keliya magaca Ciise Masiix iyo awooddiisa Ruuxiisa . Meeshii iskutallaabta Masiixa loo diidey, waxaan ka tegeynaa cirifka mantiga oo ka gala meelaha jinniyada iyo jinniyada. Dhiiga Masiixu wuxuu weli yahay badbaado keliya (1 Yooxanaa 1:5-2: 2), Ruuxiisuna waa awoodeena keliya (Sharciga 1:8).
Ereyga kale ee qoraalkaan waa "mutawaffika". Eebe wuxuu yidhi, "Waan kuu ogolaanayaa inaad ka gudubto". Eraygani wuxuu leeyahay macne badan. Waxa kale oo ay muujinaysaa dareenka "si tartiib ah u jiifsan" ama "dhammeeya nolosha qofka. Muhammad ayaa isticmaalay ereygan kakan si uu u qanciyo Kiristanka iyo Muslimiinta. Wuxuu ugu horrayntii u dhintay, kuwa kale oo aanu lahayn. Fikraddooda 'Isa lagu soo bandhigay samada iyada oo aan xanuun lahayn. Muhammad ahaa xariif ah. Waxa uu ku hadlaa laba kaliya, laakiin, haddii loo baahdo, xitaa saddex dareen, adigoo isticmaalaya kelmad keliya!
Tarjamada Turki iyo Indonesian waxay u adeegsanayaan ereygan Quraanka oo u dhigma "Waxaan kuu ogolaanayaa inaad ku dhinto nabad", maxaa yeelay taasi waa macnaha ugu dhow ee asalka eraygan. Qaar ka mid ah tarjubaanada kale, si kastaba ha ahaatee, waxay la dagaalamaan hadalkan, si ay uga farxiyaan faallooyinka Islaamka.
Muhammad loo isticmaalo in la yidhaahdo, "Dagaal waa khiyaamo!" Dagaal Quduuska ah, oo ay ku jiraan muranka Masiixiyiin iyo Yuhuudda, ayaa sidaas darteed ka buuxa khiyaano iyo khiyaamo. Waa inaan bedelnaa habkeena oo aan caqli noqnoqonno! Wax kasta oo ay ku dhahaan Islaamku waxa loola jeedaa sida la yiri!
Ka dib markii Muxammad uu sheegay in iskutallaabta Masiixa la iska fogeeyay oo la cirib tiray "trickest trick" ee Allah, wuxuu nuujiyay murugo gargaar waxayna isku dayeen in ay ku qancaan wafdiga Masiixiyiinta waqooyiga Yaman, kuwaas oo (sida ay qortay Muhammad Ibn Hisham) ayaa u yimid inuu ka hadlo arrimaha rumaysadka isaga oo jooga Madiina. Isagu wuxuu ka dhigay Allah kor u qaadista Isaga! Tani waa sheeko xasaasi ah ee Quraanka. Masiixu waa nool yahay! Muxammad waa dhintay! Sida laga soo xigtay Qur'aanka Ciise Ismaaciil wuxuu ku nool yahay Alle, isaga oo la hadlaya (Suras Āl 'Imran 3:55; al-Nisa' 4:158; al-Ma'ida 5:110-111,116-118; Al-Anbiya ' 21:28 iyo kuwa kale). Muhammad, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sugayaa marxalad dhexe (Barzakh) sarakicinta kuwii dhintay iyo maalinta xukunka. Tani waa sababta dhammaan Muslimiintu u leeyihiin inay isaga ku baryaan, in uu helo nabad, mar kasta oo magaca Muxammad ah (Sura al-Ahzab 33:56).
Ruuxa ka danbeeya diinta Islaamka wuxuu u dulqaadan karaa nolosha iyo soo noqoshada Masiixa, oo wuxuu ku darayaa nidaamka diinta Islaamka, laakiin marnaba ma aqbali karo iskutallaabtiisa iyo ilaahiisa! Sidaa darteed, digniinaha Bawlos iyo Yooxanaa waxay khuseeyaan Islaamka, sidoo kale (Galatiya 1:8-9, 1 Yooxanaa 2:21-27; 4:1-5). Hadal kasta oo wadaagis ah oo lala yeesho Muslimiintu waa inay sidaa daraadeed, ma aha inay saaxiibo samaystaan, laakiin ku duceyso salaadooda siidaynta ka soo bixitaankooda. Muxammad wuxuu ogaa sababta uu uga digay dadka Muslimiinta ah ee ka midka ah saaxiibada kale ee diinta kale, gaar ahaan Masiixiyiinta (Suras Āl 'Imran 3:28; al-Nisa' 4:89; al-Anfal 8:73; al-Mumtahana 60:1 , 9). Waa inaan ka cabsanno xiriirka Muslimiinta, sababtoo ah barakada Masiixa way ka xoog badan tahay habaarka Muxammad (Matay Āl 'Imran 3:61; al-Tawba 9:29 iyo kuwo kale)!
Ereyga gaarka ah oo ay ku jirto macnaha "si tartiib ah u jiifa" waxaa loo isticmaalaa dhimashada Masiixa mar labaad Quraanka (Sura al-Ma'ida 5:117). Halka, Wiilka Maryan wuxuu si gaar ah ugu hadlaa Eebe si shakhsi ah oo toos ah, ka dib markii uu kici kari waayay oo uu xaqiijiyay in Ilaaha Qaadirka ah uu iska dhaafo oo uu masuul ka ahaa xerta xaggiisa. Dhimashada Masiixa waa la soo bandhigaa laba siyaabood, hal mar oo weli socda, mustaqbalka dhow iyo marba sida loo dhamaystiray, marxaladdii hore ee fiicnayd, sidaas darteed akhristaha Quraanka waa inuu hubiyaa in Masiixu marnaba iskutallaabta ha lagu qodbo, laakiin wuxuu ahaa xanuun aan loo dulqaadan karin naftiisa Ilaah!
Diidmada kama dambaysta ah ee iskutallaabta Masiixa
Aayaddan keliya ee Quraanka ah ee diidaysa iskutallaabta Is-araga Islaamka (Sura al-Nisa '4:157) waxay ka dhigan tahay dhammaadka Muxammad horumarkiisa ee ku aaddan dabeecaddiisa dhimashada Masiixa. Aayaddani waxa ay tiraahdaa oo tirtirtaa dhammaan "muujinta" hore, haddii ay kuwan u ogolaadaan suurtagalnimada iskutallaabta ee Wiilka Maryan. Diiditaankaas oo ah dil toogasho ah oo Masiixa ah ayaa lagu muujiyay hab qarsoodi ah, si kastaba ha ahaatee, si ay uga baxdo meelaha shaki iyo tarjubaanka liddi ku ah. In Sura al-Nisa 'waxaan akhrinaa:
"Yuhuuddu waxay yidhaahdeen, waannu dilnay Masiixa, Isa, ina Maryan, Rasuulka Alle! (Nabi) Luudhna uma Saarayn inay Xumaan oo Markaas ku Faraxaan Kalimad (Mu'miniin) waxaad Dhahdaa Eebe waa uun ILaah kaliya Anuguna waxaan ka Bari ahay waxaad la Wadaajinaysaan. waxay dheheen kuway la wadaajiyeen (Eebe) an naga hanuuniyo xagooda, Eebana waa u wali kuwa dhawrsada. (Sura al-Nisa '4:157-158)
Qoraalkan waxaa ku jira dhowr dabeecadood:
● Waa lagama yaabo in Yuhuudda ku sugan Madiina ay qirteen dadweynaha in Wiilka Maryan yahay Masiixa dhabta ah iyo Rasuulka Alle! Iyagu ma ay rumaysan yihiin dhalashada bikradda ah ee Ciise, ama in uu uur leh. Waxay isaga u diideen sida Masiixa oo waxay ugu yeedheen Isaga Beelzebub, ugu sarreeya jinniyaadka (Matayos 12:24, Markos 3:22-27, Luukos 11:14-23). Qoraalkan Qur'aanka ah ma noqon karo asal ahaan Yuhuudda, sababtoo ah iyagu ma aysan aqoonsan Ciise oo ah malaa'igta Ilaah, laakiin way qariyeen magaciisa oo dhan gebi ahaanba.
Si kastaba ha ahaatee waa la arki karaa in Yuhuuddu ay doonayeen inay u digaan Muxammad in uusan mar dambe dhibin oo ku hanjabin, haddii kale waxay dili doonaan, sida ay u dileen "Qur'aanka" Masiixa Isa. Waxaa macquul ah in ay si khaldan u isticmaalaan magaca Masiixa oo ah khatar dhib badan.
● Muxammad waxaa lagu hanjabay dhowr jeer by Yuhuudda ee Medina, iyo sidoo kale ganacsatada of Mecca. Laakiin wuu is hoosaysiiyay isagoo leh, "Alle waa aamin, mana suurtagalayn in uu rumaystaha Ciise u dhiibo gacanta Yuhuudda, haddii kale waxay noqon kartaa mid ixtiraam u ah inaan sidoo kale ku dhici karo gacmahooda." Sababtoo ah daacadnimada Alle iyo nabadgelyadiisa, wuxuu diiday diidmadii oo aad u fajacsanaa ayaa ku jawaabay, "Kama ay dilin isaga, iskama aysan iskutallaabin!"
● Muxammad meelna ma dhicin in Ciise uusan aheyn mid la dilay oo iskutallaabta lagu qodbay. Waxa uu kaliya ku adkeeyay in aanay ahayn Yuhuudda Masiixa diley! Waxaa laga yaabaa inuu maqlo in Yuhuuddu ay sameeyeen inay iskutallaabta ku qodbaan, laakiin waxay dhagxiyeen. Waxay hoosta ku hayaan awoodda Roomaaniga ah ee aan awoodin inay ku xukumaan qofna inuu dilo ama dilo. Sidaa darteed Muhammad macno waa sax. Yuhuuddu ma ay dilin ama iskutallaabta Ciise! Qoraalkan Qur'aanka, ee macnaheedu waa mid sax ah, heshiiskayagu wuxuu yareeyn karaa xiisadaha u dhexeeya Masiixiyiinta iyo Muslimiinta.
Dhamaan aduunka oo dhan waxaa lagu yaqaanaa in Roomaanku ay iskutallaabta ku qodbeen kumanaan addoomo cadaabi ah iyo dambiilayaal shisheeye ah. Sidaa darteed, aayaddan Qur'aanka ah ayaa bixinaysa suurtagalnimada in ay ahayd Roomaanka oo runtii iskutallaabta ku qodbey Ciise. Maanta muwaadin muslimiin ah, oo raba inay dhisaan buundada masiixiyadda, si qumman u qiraan suurtagalnimada suurtagalnimada inay tarjumaan Quraanka.
● Muxammad waxa uu isticmaalay qaab naadir ah oo qumman si uu u sharaxo in Masiixa loo sameeyay "mid la mid ah" iskutallaabta lagu qodbay indhaha Yuhuudda (shubbiha lahum). Waxa uu diidey Masiixa iskutallaabta Masiixa inuu ahaa xaqiiqo taariikheed, laakiin wuxuu ku jawaabay in loo adeegsaday oo keliya inuu u muuqdo mid "iskutallaabta lagu qodbo", sida fanku.
Muxammad waxa laga yaabaa inuu maqlo qowlka Masiixiga ah ee dooxada Nile ee ka soo horjeeda in ay ahayd mid aan la qiyaasi karin in Ilaaha weyni uu noqday bani-aadamnimo iyo in uu fuliyo baahiyaha aadanaha. Waxay rumaysnayeen in Ilaah keliya u muuqday nin, laakiin marna runtii ma dhicin. Waxa kale oo ay barayeen in Masiixu, sida runta ah, Ilaah ma dhiman karin, ama iskutallaabta lagu qodbay, laakiin wuxuu u muuqday uun! Markuu maqlo Muxammad wuxuu maqlay markiisii ugu horraysay ee uu u arko fursadihiisa oo wuxuu ku yidhi, "Masiixiyiinta saboolka ah, waxay u malaynayaan oo rumaysan yihiin in Masiixa uu u dhintay iskutallaabta korkeeda, laakiin wuxuu u muuqday oo keliya iyaga, isaga oo aan iskutallaabta lagu qodin!" Muhammad dhowr jeer saameyn ku yeeshay ama marin habaabiyay by diinta kiristaanka.
Mufasiriinta Muslimiintu waxay si weyn u riyaaqeen tarjumaadda foomkaan "barkin" oo loo sameeyay inuu iyaga u muuqdo. Sheekooyinka aan dhammaadka lahayn ee soo socda ayaa wali ku wareegaya dalalka qaarkood maanta Muslimiinta maanta:
- Qaar waxay yidhaahdaan: Simon oo reer Kuranaya ahaa ayaa lagu qasbay inay askarta Roomaanku ku qasbaan inay iskutallaab ku qaadaan iskutallaabta oo ay wiiqeen Ciise. Markay gaadheen meeshii loogu talagalay iskutallaabta, waxay si khalad ah iskutallaabta loogu qodbay Simoon halkii Masiixa. Wiilka Maryan wuxuu si xor ah u socday.
- Qaar kale waxay odhanayaan: Alle waa uun! Waxa uu Ciise u eg yahay wejiga Yuudas, sidaas darteed Yuudas iskutallaabta lagu qodbay. Laakiin Isa, oo loo sameeyay inuu u ekaado Yuudas, wuu baxsadey. Markii ay maqleen qowmiyadda Ciise, sheekadii Muslimiinta waxay ku tiri: "Ma u malaynaysaa in Maryan, hooyadii Ciise, oo ku taalla iskutallaabta Ciise, ma awoodi karin inay wiilkeeda ka soocdo Yuudas isaga oo ka sareysa? Alle ha u naxariisto sida ugu wanaagsan ee haweenka adduunka ah iyo kan xigta (Sura Al 'Imran 3:42) oo ay ku khiyaanayso iyada oo ay u barooranayso saacado loogu talagalay cunsuriyihii dhimanaya, halka wiilkeedii hore u baxsadeen labadaba waa kuwo aan lala socon ".
- Qaar kale sheeganaya: Masiixa run ahaantii iskutallaabta lagu qodbay. Markaasaa qorraxdu ka dhacday dhulka, oo dadkii badidiisiina waxay qariyeen shareerkii. Markaasay dhulgariirkii raaceen, oo dhammaantoodna way wada gariireen, oo raggii reer Rooma waxay gabbadhneen iyaga. Marka qof walba uu tago, Masiixa wuxuu iskutallaabay iskutallaabta Golgotha oo keligiis oo kali ah, sidaas darteed wuxuu ka soo fuulay iskutallaabtiisa - iyo sida Muslimiinta Muslimiinta ah - waxay u socdeen Kashmir, waxaana ku dhintay dhimasho dabiici ah. Hase yeeshee, mowqifka 'Isa oo ku yaal Srinagar, waxaynu aragnay indhaheenna, maaha Masiixa Wiilka Maryan, laakiin awoowe awal ah oo reer Kashmiri ah, sheeko Muslim ah oo magaciisa la yidhaahdo Isa, iyo in uu qabriga ahaa khalad waxaa loo aaneeyay 'Ciise Masiix oo uu u adeegsaday Axmadiya.
Isku day inaad ku qanciso Muslimiinta ku saabsan iskutallaabta Ciise oo ah xaqiiqo taariikheed waa wax yar oo la isticmaalo illaa inta aysan iyagu isma waydiin sharaxaad. Dhibaatada ugu weyn ee ka dhexeysa adeegga Muslimiinta waa xukunkooda ah inaysan u baahnayn dib-u-celiye, dhexdhexaadiye ama allabaryo ficil ah. Iyagu ma ay ogayn in dembigu macallin weyn yahay. Waxay u malaynayaan in ay ku kalsoonaan karaan camalkooda xun xun (Suras Hud 11:114; al-'Ankabut 29:7; al-Fatir 35:29-30). Maaha wax caawimaad ah si loo sharaxo iskutallaabta Masiixa iyaga, haddii ay u malaynayaan inaysan u baahnayn beddel ama badbaadiye. Waxay ku qanacsan yihiin in ay ku filan yihiin naftooda!
Iyaga oo ogaanaya sida lumay oo ay u cambaareeyeen, sida aadanaha oo dhan, marmarka qaarkood waxay ka muhiimsan yihiin fahamkooda xaqiiqda jirta ee dhimashada Masiixa iskutallaabta. Waa in ay marka hore bartaan in aan ka soo horjeeda Ilaah oo dhan ay tagi doonaan cadaabta!
Sabuurrada towbad keenka ahi waxay bixiyaan caawimo badan oo lagu fahmo xaqiiqadan (Sabuurrada 6:2-10, 32:1-11, 38:2-32, 51:3-19 iyo kuwa kale). Waxaan kugula talineynaa in Muslimiintu xusaan Sabuurrada 51, si ay dhammaantood wax uga qabtaan maskaxda towbad keenka. Caqiidada Muslimiintu inta badan ma gashana madax madaxa ilaa qalbiga, laakiin sida ka soo horjeeda, wadnaha ilaa madaxa. Tani waa xaqiiqda qarsoon.
Markii markii hore loo weydiistay sheeko Islaami ah in uu akhriyo Sabuulka 51-aad barnaamijka raadiyaha, si la mid ah Quraanka Quraanka, ilmo ayaa si lama filaan ah u duubay dhabannada. Waxa uu si kooban u akhrin mawduuca, laakiin waxa uu ku tukaday oo isu aqoonsaday sidii dembiile. Sabuurrada 51 waa iskuulka towbad keenka oo dhan. Waxay na tusineysaa cidda aan nahay. Aayadahan waxay ku jiraan tusaalooyin qoto dheer oo loogu talagalay dhammaan dadka isku qanacsan:
Sabtida 51:3 Dambiilayaasha Sabuurka 51 waxay weydiisanayaan naxariis iyo nimco. David wuxuu fahamsan yahay inuusan xaq u lahayn inuu ka cafiyo. Wuxuu ka codsanayaa in Eebahay uu tirtiro dhammaan dembiyadiisa, ma aha oo keliya qaar ka mid ah qaladaadkiisa, iyo sida ay u tahay naxariista aan xad lahayn ee Ilaah.
Sabuulka 51:4 Isagu wuxuu ku nuuxnuuxsaday jidhkiisa, naftiisa iyo ruuxiisaba, oo wuxuu nadiifiyey nadiifinta dembiyadeedii nijaasta ahaa.
Sabuurrada 51:5 Wuxuu aad u xanuunsaday dembigiisii weynaa. Waxay ku dhaceen isaga. Ruuxa Quduuska ah uma uusan siinin nasasho. Wuxuu u maleyn kari waayay inuu si caadi ah u seexdo mana hurdo!
Sabuurka 51:6 Wuxuu fahmay: Dembigu wuxuu ka dhigan yahay iska hor imaad ka dhan ah Ilaaha, abuuraha iyo garsoorka. Waxa uu qiray in dembigu uusan ahayn khalad ama ficil qalad ah, laakiin dembi ah oo ku saabsan sharafta iyo quduusnimada Ilaah. Waxa uu qirtay: "Waad saxantahay, si kasta oo aad iigu xukuntid, waxaan noqday dambi aad u qaali ah oo iga lumay xuquuqdayda."
Ps 51:7 Waxaan si buuxda u nadiifiyaa. Horeba markii ay hooyaday i uuraysatay, waxaan dhaxlay jidhka dembiga iyo ruuxa awoowgeyga. Dhalinyaraddayda ayaa la igu dhacay. Jiidhkayga, ruuxayga, qalbigayga, rabitaankayga, wax walba waa mid aad u xun.
Ps 51:8 Eebow, waxaad dooneysaa inaad maqasho runta. Waxaan qirayaa dhammaan dembiyadayda qarsoon. Waxaad i tustay cidda dhabta ah.
Ps 51:9 Haddii geed husob ah, warshad loo isticmaalo jeermiska horey u jirey, waxay noqon laheyd caawinaad, aniga iyo dibaddaba ku dhaq. Dhammaantiina iga dhaqso dembiyadayda, markaas anigu waxaan noqon doonaa caddaan baraf cad.
Ps 51:10 Sabuurradaada i maqla, Oo dhibaatadayduna ha i soo few timaado. Waad burburisay sharaftayda, laakiin waad ixtiran kartaa, aniguna waan ku raaxaysan jirey qadiyadeyda ugu dheer.
Ps 51:11 Oo ha iga qarinin, oo keligaa ii wada sheeg. Dambi, tirtir, oo tirtir dhammaan wixii qaladkeyga!
Ps 51:12 Waxaan ahay kiis rajo la'aan ah! Kaliya dib-u-abuurid cusub ayaa i badbaadin kara:
12 Iga samee meeshiisa quduuska ah, O God, Oo igu dhex cusboonaysii ruux qumman.
13 Ha i xoorin. Ha ka qaadin Ruuxa Quduuska ah aniga.
14 Mar kale ii soo laabtaa farxad. oo ii samee inaan isaga raalli ka ahaado.
Waa in aan waydiisanno nimcada Ilaah in ay ka caawiso Muslimiinta inay ogaadaan dembiyadooda ku saabsan arrintan ama hab kale, sida aynu nafteena ugu baahan nahay inaan toobad keenno. Sabuurradani waxay u hogaamin kartaa qof kasta oo tukanaya oo toobad keena, ilaa uu ugu dambeyntii ogaado in ruuxa qalbi jaban iyo qalbi jilicsan uu Ilaahay ku farxi karo.
Addoomayaasha kale ee Masiixa waxay isticmaalaan Tobanka Amar, Dhiciddii Aadan (Bilowgii 3:1-4,16) iyo gaar ahaan aragtida Ishacyaah 6:1-8 ee jebinta sharafta muslimiinta ku qanacsan. Oo markii Ishacyaah qalbi qallafsanaaday ayaa waxaa i soo ag maray wadaadkii iyo nebigii isagoo leh; ‘’Hoog baa i hoogay, waayo, waan ka go'ay, maxaa yeelay, waxaan ahay nin aan bushimihiisu daahirsanayn, oo weliba waxaan dhex degganahay dad aan bushimahoodu daahirsanayn, waayo, aniga ayaa Rabbiga ah. oo waxay arkeen Boqorow Sayidka ah Rabbiga ciidammada’’. (Ishacyaah 6:5)
Waa in aan Ciise weyddiinno inuu naftiisa u muujiyo Muslimiin iskood ujeeda, si ay u jajabaan oo ay u fahmaan jacaylka iyo quduusnimada Rabbiga oo ay ka codsadaan naxariis. Iyadoo aan loo aqoonsan dembiga waxaa si dhib leh u toobad ama cafis. Taasi waa sababta aan u sharaxney macnaha dembiga ee muslinka ah, ka hor inta aan ka hadlin iskutallaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxtarkani waa hadiyad hadiyad ah oo ka timid badbaadiyaheena (Rooma 2:4). Waa inaynu u ducayno.
Miyay dhammaan Muslimiinta tagaan cadaabta?
Waxaa jira aayad naxariis leh oo ku jirta Quraanka oo sheeganaysa in dhammaan Muslimiintu ay tahay inay tagaan cadaabta! Dabku waa meeshii aan la rabin. In Sura Maryam Muhammad uu ku dhaco dhammaan Muslimiinta:
Ma jiro mid idinka mid ah oo aan geli doono (cadaabta).
Arrintaasuna waa Amarka Eebahaa ee layeelhay Diin.
Ka dib waxaan badbaadin doonaa (ka bax oo ha baxsanin) ka cabsida ilaaha oo ku hay kuwa dulmiga ah ee ku jira jilibkooda. (Sura Maryam 19:71-72)
Qaar ka mid ah addoommadii Rabbiga ayaa ogaaday in aayadahan ay dhowr Muslimiin ah u keeneen dareenkooda iyagoo ah nooca daweynta shoogga. Hase yeeshee, rajada Islaamiga ah ee ah in laga furo dabka lama huraanka ah, si kastaba ha ahaatee, iyada oo ku saleysan fulinta shareecada, sharciga Islaamka. Kaliya Ciise wuxuu dhex martay jahannamada cadhada Ilaah ee meesheenna, si aynaan loo xukumayn oo aan cambaarayn (Yooxanaa 3:18-23; 5:24 iyo kuwo kale). Jacaylku wuxuu ina tusayaa sida jacaylka, kibirka iyo dembiga, si aan ugu mahad naqno badbaadadiisa dhammays tiran iyo noloshiisa weligeed ah.
Sida ugu dhakhsaha badan oo uu Ciise u siiyay muslim ah nimcada si loo ogaado denbiyadeeda iyo xukunka, waa in aynu tusinaa Lambarka Ilaah sidii daaweynta keliya, sababtoo ah wuxuu qaaday dembiga dunida, oo ay ku jirto dembiga dhammaan Muslimiinta (Yooxanaa 1:29-34; 1 Yooxanaa 2:1-2 iyo kuwa kale).
Dhamaadkoodii Soonka, dhammaadkii xajka ay u galeen Mecca, iyo isla mar ahaantana waddamada Islaamka, Muslimiinta waxay laayeen ido, ido, wan ama geela, mid ka mid ah qoys kasta, si loo hubiyo in barakada Alle ku jiri doono iyaga. Si kastaba ha ahaatee, ma garanayaan macnaha ku jira bixinta dhiigga ee Axdiga Hore, ama suurtogalnimada kuwan oo ah beddelaadda dembiyadayada, iyo dib u heshiisiinta dhiigooda daadsan. Sidaa darteed waxa ay caawin kartaa qaar ka mid ah muslimiinta in ay baraan sharciyada dembiga iyo qurbaannada gubashada ee Axdiga Hore (Laawiyiintii 4:4,14,24,33 iyo kuwa kale), ama ku saabsan jaahilinta maalinta weyn ee dib-u-heshiisiinta (Laawiyiintii 16 : 6-10). Sidaa darteed waxay u soo dhowaan karaan Ilaaha runta ah iyo kuwa quduuska ah, oo ay fahmaan ujeeddada hore ee xoolaha uugu keenayo Axdiga Hore si ka sii wanaagsan.
Fikrado ah oo ku saabsan lambarka Kormarista ee Ciise sida Ciise ula macaamilay xertiisa isaga oo soo bandhigay Cashada Rabbiga ayaa laga yaabaa inay horseed u ahaato helitaanka heshiisiin dhammaystiran oo la leh Ilaah iyada oo loo marayo nafsaddiisa Ciise Masiix.
Mawduuca ugu muhiimsan ee garashada iyo rumaysashada Lambarka Ilaah ayaa ah muujinta Axdiga Hore ee "adeegaha Rabbiga": Ishacyaah 53:4-12. Injiilkan Axdiga Hore waxa uu noqday raaxo daa'im ah oo wuxuu caawiyay dad badan oo doonaya inay fahmaan xaqnimada rumaysadka, marka ay jidh dilaan. Iimaanka deg dega ah ee khasnadda Boqoradda Candace ee ka timaadda Itoobiya waa calaamad cad oo tan (Sharciga 8:26-39).
Waxaa intaa dheer waxaad isticmaali kartaa Quraanku Quraanka si amarka Ilaahay uugu siinayo Ibraahim inaanu u bixin wiilkiisa Isxaaq. Halka Eebe wuxuu ku yidhi:
"Oo waxaannu ku soo furannay qurbaan la gubo oo waaweyn’’. (Sura al-Saffat 37:107)
Jumladani waxay caqabad ku tahay dhammaan dadaalada Muhammad ee Quraanka si ay uga fogaadaan wixii dib-u-heshiisiin ah ee Ilaahay. Tani waxa loogu yeeraa "waxyiga" waxa ay qiraysaa suurtagalnimada in dib u heshiisiin rabbaani ah loo soo mariyo qurbaanka la dilay! Isxaaqkii dhammaystirmay ee Isxaaq wuxuu ahaa mid aan la qabin iimaankiisa ama shuqulladiisa wanaagsan, laakiin keliya nimco! Waxaan u baahannahay inaan Muslimiinta ka dhaadhiciyo aayaddan muhiimka ah ee Quraanka, maadaama ay ka hadlayso "allabaryo" ah, oo horeyba loo gaadhay ka hor inta aan la dilin ramaalka vicarious. Maanta Muslimiintu waxay isku dayi doonaan inay ogaadaan cidda ama waxa ay tahay tan barakacan rabbaaniga ah ee dib u heshiisiinta ee badbaadada Isxaaq. Waxaannu ognahay qarsoodigan: Ciise Masiix waa Wanka Ilaah ee runta ah, oo qaata dembiga dunida. Wuxuu sidoo kale badbaadiyey dhamaan Ibraahim.
Muslimiinta qaarkood ayaa laga yaabaa in ay diidaan in Ibraahim isku dayay inuu Ismaaciil u huro, oo uusan aheyn Isxaaq, si uu ugu wareejiyo barakooyinka ficilkan ku saabsan Carabta iyo Muslimiinta (Sura al-Saffat 37:8-14). Hase yeeshee, Quraanka ma sheegin magaca wiilka Ibraahim ee la dilay. Ilaa wakhtiga al-Tabari, tarjubaanada Islaamka ayaa magacooda Isxaaq u magacaabay inuu yahay mid la abaabulo. Dabadeedna waxay u beddeleen tarjumadooda Ismaaciil.
Islaamiyiinta Muslimiintu waxay sii wadi doonaan, in Quraanku uu shan jeer ku qoro hadal muhiim ah (Suras al-An'am 6:164; al-Isra 17:15; Fatir 35:18 al-Zumar 39:7; Najm 53:38):
‘’Mid ka mida gaaladuna ma aha waxaan gaadhsiin cad ahayn.’’ (Sura al-An'am 6:164)
Aayaddani waxa ay si toos ah uga dalbanaysaa in aan wax beddel ah oo culays ku ah dembiga naftiisa, uu soo faragaliyo oo uu ku qaado dembiyada nin kale. Si aan uga jawaabno tan waa inaan ku ogaanno in Quraanka dhowr jeer marqaati u ah in Masiixa uu weli dembi la'aan ku sugnaa; Tani waxaa ugu dambeyntii la xaqiijiyay in uu kacsan yahay (Suras Āl 'Imran 3:44,45, al-Nisa' 4:158,171; Maryam 19:19; al-Anbiya' 21:91; al-Tahrim 66:12 iyo kuwo kale). Sababtoo ah ku kalsoonaanta Masiixa oo dhan shanta aayadood ee Quraanka ah ee ka hadlaya suurtogalnimada bedelaad waxaa loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo soo horjeeda: "Beddelka aan dembiga lahayn, wuxuu qaadi karaa culeyska dadka kale ee dembiga ah!"
Ciise iyo naftiisa allabari jacaylka dembiilayaasha oo dhan ayaa ah jawaabta kaliya ee caawinta ah ee rajo la'aanta ah. Magaca Ciise ayaa weli ah barnaamijkiisa: "Wuxuu dadkiisa ka badbaadin doonaa dembiyadooda." (Matayos 1:21) Dhimashadiisa beddelka ah waxa ay abuurtay mudnaanta naxariista annaga oo dhan. Ballan qaadka Masiixu waa qeex: "Wiilka, wiilka, gabadha, dembiyadiinna waa cafiyan yihiin!" (Matayos 9:2; Lukos 7:50 iyo kuwa kale)
Muxammad ma uu sheegi karin sida jumladahan oo kale ah. Wuxuu marnaba u maleynaynin inuu dhimanayo meesha Muslimiinta ah. Dhimashadiisa sidoo kale waxay ahayd mid aan waxtar lahayn, sababtoo ah Alle wuxuu amar ku bixiyay dhowr jeer inuu ku weydiisto cafiska dembigiisa (Suras Ghafir 40:55; Muhammad 47:19; al-Fath 48:2; Al Nasr 110:3) .
Ka dib markii Ruuxa Qudduuska ah lagu daadiyey, oo ah natiijadii ka dhalatay Masiixa ee ficilkii fashilmay, Rasuulladu waxay qabteen oo ka hadlayaan cafiskooda iyada oo loo marayo dhimashada Ciise oo leh jacayl naxariis leh. Rasuulkii Butros wuxuu ku qirtay: "Lama iibin wixii khasaare ah sida lacagta iyo dahabiga ah ee aad ka heshay habdhaqanka awowayaashiin, laakiin dhiigga qaaliga ah ee Masiixa, sida wan yar oo aan lahayn laaluush iyo meel aan lahayn." (1 Butros 1:18-19)
Rasuulka Yooxanaa wuxuu caddeeyay farriintan: "Haddii aynu iftiin ku dhex soconno sida uu iftiinka ku jiro, waxaan leenahay xidhiidh wadajir ah, dhiigga Ciise Masiixna wuxuu inaga nadiifiyaa dembiga oo dhan, haddii aan nidhaahno waxaanan lahayn dembi , annaga qudhayadu waannu khiyaanaynaynaa, oo runtu kuma jirto isaga, haddaynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo xaqnimo, inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan." (1 Yooxanaa 1:7-9)
Rasuulka Bawlos wuxuu qoray: "Farriinta iskutallaabtu waa nacasnimo kuwa ku dhinta, laakiin naga badbaadi waa awoodda Ilaah ... Waxaan ku wacdiyi karnaa Masiix iskutallaabta, Giriigtu waa nacas, laakiin kuwa loo yeedhayse, ha ahaadeen Yuhuudda ama Gariigta, Masiix baa u ah xoogga Ilaah iyo xigmadda Ilaah." (1 Korintos 1:18, 23-24)
Rev. Iskandar Jiyad ayaa qiray, "Waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo aan dhibsaday afartiisii xaas ee aabahay aabahey iyo doodaha xun ee u dhexeeya afartan qoys ee ku nool hal saqafka Laba daqiiqo oo raaxo leh, waxaan si dhakhso ah u fahmay waxa Yooxanaa qoray: "Ilaah siduu jecel yahay adduunka ayuu siiyey Wiilkiisa keligiis ah, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan dhimanayn, laakiinse uu weligiis noolaanayo." (Yooxanaa 3:16)
Hindida hooyada oo aan awoodin inay wax qoro ama akhriso oo ay umuliso ilmo darsin ah ayaa la waydiiyay baabtiiska, ka dib markii ninkeeda Muslimku noqday Christian. Wadaadku waxa uu ka walaacsan yahay in la baabtiiso iyada, sida uu u malaynayay inay kaliya rabtay inay samayso si ay u farxiso ninkeeda. Markii uu waydiiyay sababta ay u tahay haweeney Muslim ah oo marwalba waydiistay inay baabtiiso, waxay u jawaabtay si ballaadhan, "Ciise Masiix ayaa cafiyay dhammaan dembiyadayda on iskutallaabta iyo noloshada weligeed ah ayaa galay qalbigayga."
Maxay tahay markhaatiga shakhsi ahaaneed?
Aayaddee Kitaabka Qudduuska ahi waxay si cad u muujinaysaa iimaankaaga Maxaad ka wadaagi kartaa mid ku dhintay kan iskutallaabta ku dhintay? Waa inaan wakhti qaadnaa si aanuga fekerno oo aan u tukado markhaatiyadayada Muslimiinta ee waddankayaga hooyo. Lambarkoodu si joogto ah ayey u korayaan. Miyuu qalbigiinna oo dhan muujin kari waayay inaad badbaadiso fartii badbaadada, oo aad kartay?
7.10 -- B A R R I S
Haddii aad si taxadar leh u baratay buug-yarahan, si fudud ayaad uga jawaabi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaabaya 90% dhammaan su'aalaha ku jira siddeed buug oo taxanahan ah, si sax ah ayuu uga heli karaa xarunteena
siyaabo wax ku ool ah oo loo qabto wada hadalka Muslimiinta ku saabsan Ciise Masiix
sida dhiirigelinta adeegyada mustaqbalka ee Masiixa.
Maxay ugu badantahay Muslimiinta in ay u malaynayaan in iskutallaabta Masiixa ay tahay shucuur?
Muxuu Muslimiinta qaarkood u malaynayaa in Yuudas iskutallaabta lagu qodbay halkii Masiixa?
Intee jeer ayay Quraanka ku celisaa "Qofna ma qaadi karo dembiga qof kale"?
Muxuu Muslimiintu ku andacoonayaa in Eebe uu cafiyo qof kastoo uu rabo, mar kasta oo uu doono iyo inuusan u baahnayn allabaryo ama bedelaad?
Maxay Muslimiintu u rajaynayaan (wax micno ah) in shuqulkooda wanaagsani ay ka qaadi doonaan camalkooda xun?
Ilaa xadkee ayuu aaminsanaa Islaamka ah ee qadarka ka soo horjeeda iimaanka badbaadada xagga Masiixa?
Sababtee iskutallaabtu weli waxay tahay "taboo" dhammaan Muslimiinta, xitaa haddii ay jaahil ka yihiin Qur'aanka iyo Shareecada?
Waa maxay micnaha ruuxiga ah ee xaqiiqda ah in Muslimiinta si wadajir ah ay ku xidhan tahay ruux ka soo horjeeda iskutallaabta?
Muxuu Ciise u tilmaamayay masaska biraha kor loogu qaaday Muuse lamadegaanka si uu u sharaxo inaan jiri doonin badbaadin marka laga reebo haddii uu kor u qaado iskutallaabta? Ciise iskutallaabta lagu qodbay miyuu sumcaddii oo dhan u ekeeyaa sida abeesada?
Amarkii Rasuulladu waxa ay keeneen addoommadii Cibraaniyadaha ahaa ee Masar iyo sababta Ciise Weyn ee Kormaris ah? Xaggee ayuu ka badbaadi doonaa, maxaa yeelay waa inaan cunno hilibkiisa?
Immisa waxsii sheegyo ayaad ka heli kartaa Sabuurrada 22 oo rumaysadka Ciise lagu fuliyay sida ku xusan Injiillada? Waa kuwee waxsii sheegyadani ay ka dhaadhicin karaan Muslimiinta in Masiixa run ahaantii iskutallaabta lagu qodbay?
Muxuu Ciise u baryay "Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad iiga tagtay?" Aabbihiis miyuu isaga ka tagay? Midnimadu waxay ahayd Saddexmidnimadii Quduuska ahayd ee loo qaybiyay iskutallaabta Masiixa? Waa maxay micnaha salaaddani?
Muxuu erayada Ishacyaah 53:4-7 ku jira balanqaadka ugu qancinta ee Axdiga Hore si faahfaahsan u sharaxaya in Ciise yahay bedelkeena? Miyuu qaladkan qoraa qalbiga?
Maxay 30 qaybood oo macnihiisu ka dhigan tahay muujinta nabiga Nebi Sekaryaah iyo siduu ahaa waxsii sheegistiisii ​​lagu dhammaystiray Axdiga Cusub? Ciise waa Rabbiga, Rabbigu ma yahay?
Muxuu farriinta Matayos 20:28 u yahay mid aad u muhiim ah oo awood u leh inuu baddalo dhaqamada iyo caadooyinka bulshadaba?
Muxuu Ciise u qarin waayay ama u baxsaday ama u hijroonayay Lubnaan ama Suuriya oo si faahfaahsan u ogaaday waxa isaga sugayay Yeruusaalem?
Waa maxay farqiga u dhexeeya tukashada koowaad iyo tan labaad ee Ciise ee Jannada Getsamane?
Sababtee ayuu Ciise u sarakiciyay sarakicistiisii ​​mar kale soo ururiyay xertiisa isaga oo ka cararaya inuu baro waajibaadka lama huraanka ah ee dhimashadiisa dhimashada Axdiga Hore?
Ka dib markii ay heleen awoodda Ruuxa Quduuska ah siduu Butros iyo rasuulladii kale uula dhaqmay Yuhuudda? Muxuu "aamusnaanta" Yuhuudda ku celcelinaysa eedeymaha ku celceliska rasuullada?
Maxay ugu dhowdahay Muslimiinta in ay rumaysanyihiin xaqiiqda taariikhiga ah ee iskutallaabta Ciise iyo badbaadinta iyaga oo dhammaystiran? Maxaan ugu dadaalnaa in aan u weydiino Aabbaheena jannada ku jira?
Muxuu wargaysyada taariikheed ee Tacitus iyo Flavius ​​ku saabsan Ciise iyo dhimashadiisa iskutallaabta muhiimka u ah Muslimiinta?
Maxay caddayntu ka timaaddaa shaxanka (sawirada garaafka ee derbi) ee qof iskutallaab ku xiran madaxa dameerka hoose ee Palladium ee Rome?
Muxuu Jamal Abd Al-Nasser u xaqiijiyay wadiiqooyin kala duwan oo warbaahineed oo sheegaya in Muslimiintu ogyihiin kuwa runtii iskutallaabta lagu qodbay Masiixa? Waa maxay natiijada sharciga ah ee qirashadiisa?
Sidee buugaagta casriga ah ee Yuhuuddu ula xidhiidhaan iskutallaabta Masiixa?
Intee jeer ayaa Quraanka u sheegaa dilka nebiyadii waa Yuhuudda? Muxuu Muxammad u muujiyay, oo ka soo horjeeda caqli ahaan, wuxuu diidey dhimashada Masiixa?
Sida laga soo xigtay markhaati been abuur ah ee Sura Maryam 19:33 maxay Masiixa sheegaysaa dhalashadiisa iyo dhimashadiisa? Muxuu macnaheedu yahay kitaabka kitaabka ah ee aan ku qori karno aayaddan muhiimka ah ee Quraanka?
Maxay yihiin isla egyihiin iyo kala duwanaansho laga heli karaa markhaatiga Masiixa (Sura Maryam 19:33) iyo warbixinta Djibril oo ku saabsan Yahya (Sura Maryam 19:15)?
Maxay Ilaah ugu yeedhay "kuwa ugu khiyaanada badan oo dhan" marka la eego qaabka uu uuga jeedo Masiixa? Sidee Kitaabka Qudduuska ah uga faaloodnaysaa ereygan
Maxay ahayd khiyaanadii ugu weynayd ee Ilaahay ee ku saabsanayd Yuhuudda iyo Masiixa?
Siduu Muhammad u awooday inuu ku farxo Kiristaanka iyo Muslimiinta isla mar qudha iyada oo la adeegsanayo hal erey oo lagu tilmaamayo geerida Masiixa? Maxay yihiin macnaha saddexda macquulka ah ee ereygan?
Maxay Qur'aanka u xaqiijinaysaa inuu Masiixa Ilaahay u huray, laakiin isla markaa wuxuu diidey dilka naxariis la'aanta ah?
Maxay tahay, sida uu qabo diinta Islaamka, miyay macnaheedu tahay in Masiixu nool yahay laakiin Muxammad waa dhintay?
Maxay tahay bayaanka Yuhuudda ee Sura al-Nisa '4:157 su'aal iyo xaqiiqdii qaldan?
Maxay tahay sababta uu u diidey Muxammad inuu yidhi "iyagu ma ay dilin isaga (iyo) ma iskutallaabta ku qodbeen" waxay na siiyeen fursad aan ku caddaynno in Wiilka Maryan iskutallaabta lagu qodbay?
Sidee mufasiriinta muslimiinta ah u sharaxayaan bayaanka Quraanka in Masiixa aan iskutallaabta lagu qodin, laakiin kaliya loo sameeyay inuu noqdo mid iskutallaabta lagu qodbay?
Maxay badanaa waxtar u tahay in la isku dayo in la cadeeyo taariikhda iskutallaabta Masiixa inuu yahay Muslim haddii uusan naftiisa dalban caddayntaas?
Sidee baan u hagaajin karnaa muslimiin si aan u fahanno inuu yahay dembi lumay oo la karhay?
Sidee ayuu Quraanka u sheegayaa in dhammaan Muslimiintu galayaan jahannamada?
Aayadda Quduuska ah ee Ibraahim wuxuu wiilkiisa ugu ducaynayaa kan ugu sarreeya, maxaad Ilaah ugu yeeraysaa Ibraahim inuu na siinayo fursad aan ku sharaxno Muslimiinta dabiiciga ah ee dhimashada Masiixa?
Maxaan ugu caddayn karnaa Muslimiinta dhabta ah ee ka soo horjeeda Bayaanka Quraanka ee ah "Qofna culeys ma leh (dembigu) wuxuu qaadi karaa (culays) culeys kale"?
Miyuu Masiixa ahaa Wanka Ilaah sidoo kale wuxuu u huray dembiyadooda oo dhan Muslimiinta oo dhan markii uu ku dhintay iskutallaabta, ama waa in Ciise mar labaad Muslimiinta u dhinto hab gaar ah? Haddii kafaaraggudka Ilaah ay dhamaystiraan, maxay sababta Masiixiyiintu u diidaan Muslimiinta xuquuqdooda jannada?
Sida ku xusan khibradaada, injiilka Injiilku wuxuu ka warramayaa dhibaatada iyo geerida Masiixa waxa aqbalaya Muslimiinta inta badan?
Qof kasta oo ka qaybgalaya baaritaankan waxaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo uu u isticmaalo qaabkiisa iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo la yaqaan isaga / iyada marka uu ka jawaabayo su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga qoran oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaan kuu baryaynaa Ciise, Rabbiga noloshiisa, in uu iftiimin doono, diri doono, hage, xoojiyo, ilaaliyo, iyo inuu kula joogo maalin kasta noloshaada!
ama email ahaan:
Page last modified on July 24, 2020, at 12:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)